အိုဘယ့်…. ရခိုင်ပြည်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အိုဘယ့်…. ရခိုင်ပြည်…
Posted by ေၾကာင္၀တုတ္ on May 19, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary, Politics, Issues | 56 comments
အချိန်က မှတ်မှတ်ရရ… ၂၀၁၄ခုနှစ် တပ်မတော်နေ့…
အလုပ်ပိတ်ရက်မို့… မိန်းမနားကပ်… မိန်းမချက်ကျွေးတဲ့ထမင်းလေးစားပြီး အဆီလေးရစ်နေတုန်း..
နေ့လည် (၁)နာရီလောက်မှာ စစ်တွေရုံးက Logisitc တစ်ယောက် ကျွန်တော့်ဖုန်းကို ဆက်လာတယ်…
ပိတ်ရက်တွေကို ရုံးကဖုန်းဆက်တော့ လေးတိလေးကန်စိတ်နဲ့ပဲ ဖုန်းကိုကိုင်လိုက်မိတယ်…
အစ်ကိုရေ… ကွန်ပျူတာတွေ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့…
ခပ်နောက်နောက် ကျွန်တော်က ရေဆေးပြီး နေလှန်းထားလိုက်လို့ ပြောလိုက်မိသေးတယ်…
ပြီးတော့မှ… တစ်ဖက်နေ ဘယ်ဟာတွေဖြုတ်သယ်လာရင်ရမလဲ ဆက်မေးပါတယ်…
ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့မေးခွန်းကို ဖြေဖို့ ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးရပါတော့တယ်…
ဖြစ်တာကတော့ တပ်မတော်နေ့မတိုင်ခင်ညပိုင်းက စစ်တွေမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ NGO တွေ UN တွေရဲ့ ရုံးတွေ… ကုန်လှောင်ရုံတွေကို ဒေသခံလူတွေက အင်အားသုံးပြီး ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့… ကျွန်တော်တို့ ရုံးလဲ ပျက်ဆီးမှုရှိပြီး အရေးကြီးဒေတာတွေ ပြန်သယ်ဖို့အကြောင်းကို ပြောပါတော့တယ်..
အကျိုးအကြောင်းကတော့… မာတေဇာဆိုတဲ့ NGO တစ်ခုက နိုင်ငံခြားသူအမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သာသနာ့အလံကို မဖွယ်မရာလုပ်သတဲ့…
သိပ်ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုနဲ့ ရှိရှိသမျှ NGO ရုံးတွေ… UN ရုံးတွေကို လူအင်အားသုံးပြီး ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတော့တာပဲ… ကားတွေ… မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကို ဖျက်ဆီး…
တော်သေးတယ်… ညစောင့်ဝန်ထမ်းတွေ ဘာမှမဖြစ်ကြလို့…
လုပ်ရမယ့် အဆင့်ဆင့်ကိုပြောပြပြီး… ကျွန်တော်ဖုန်းချလိုက်တယ်…
အခုအချိန်မှာအရေးအကြီးဆုံးက Server ထဲက Hard Disk ၂လုံးရရေးပဲ… ကျန်တာတော့…
ဖုန်းချလိုက်ပေမယ့်… ခေါင်းထဲမှာ နိုင်ငံခြားသူက သာသနာ့အလံကို မဖွယ်မရာလုပ်သတဲ့…
ဘယ်လုံခြုံရေးအဆင့်ရောက်ရင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေလိုက်နာရမယ်… ဘယ်စည်းကမ်းတွေမဖောက်ရဘူး…
ဘယ်စာရွက်တွေ… ဘယ်အချက်အလက်တွေက အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံခြားသားတင်မက… မြန်မာနိုင်ငံသား ဝန်ထမ်းတွေမှာလဲ လိုက်နာရမယ့်ဟာတွေ အကုန်လုံးအစီတစဉ် ထုတ်ပြန်ထားပြီးသားပါ…
NGO တစ်ခုက ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီလိုအလုပ်မျိုးလုပ်မယ်ဆိုတာကို မယုံနိုင်အောင်ပါဘဲ…
အဲဒါနဲ့ စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို လှမ်းတီးခေါက်ကြည့်တော့လဲ… အကျိုးအကြောင်းမခိုင်လုံပေမယ့်…
သူတို့အားလုံး ကြားတဲ့သတင်းက ကျွန်တော်ကြားတဲ့သတင်းနဲ့ တစ်ထပ်ထဲပါပဲ…
အဲဒီညက ကျွန်တော် အိပ်ယာဝင်နောက်ကျခဲ့တယ်… ခေါင်းထဲမှာ မေးခွန်းတွေအပြည့်…
ရခိုင်ပြည်နယ်ကို NGO တွေအနေနဲ့ လုံခြုံရေးအဆင့်တင်းကြပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုး ဝန်ထမ်းနိုင်ငံခြားသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ပါ့မလား…
ရုံးခန်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော့အထက်က သူငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားမျက်နှာက စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ… စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကို အနားမယူနိုင်သေးတဲ့ဖိအားတွေနဲ့ ပေါင်းပြီးတွေ့လိုက်ရတယ်…
ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုတွေကို အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေဆီ ဘယ်လိုအစီရင်ခံကြမလဲ…
စစ်တွေမှာရောက်နေတဲ့ တစ်ခြားနယ်က မြန်မာနိုင်ငံသားဝန်ထမ်းတွေ… နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်တွေကို ဘယ်လိုရန်ကုန်အရောက်ပြန်ခေါ်ကြမလဲ… မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ တစ်နေကုန်ခဲ့တယ်… အဖြေအားလုံး မထွက်ပေမယ့် တစ်ချို့အစီအစဉ်တွေကို အပြတ်ဆွဲနိုင်ခဲ့တယ်…
တစ်နေ့လုံး ခေါင်းမထောင်နိုင်လောက်အောင် အစီအစဉ်တွေဆွဲ မဖြစ်အနေလုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေတန်းစီလုပ်ရင်း
ညနေပိုင်းရောက်တော့မှ ပြသနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကို စပြီးသိခဲ့ရပါတယ်…
အဲဒီရက်ပိုင်းမှာ သန်းခေါင်းစာရင်းကောက်ခံမှုနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းကိုအခြေခံပြီး… ထောက်ခံသူတွေရဲ့ အိမ်တိုင်းမှာ သာသနာ့အလံထောင်ပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်…
စစ်တွေအရေးအခင်းမဖြစ်ခင် တစ်ပတ်လောက်ကမှ စစ်တွေ၊ ဘူးသီးတောင်နဲ့ မောင်တောခရီးထွက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့် သာသနာ့အလံတွေတွေ့ခဲ့ပေမယ့် ခေါင်းထဲမထည့်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး…
အဲဒီတော့ မာတေဇာရဲ့ကုန်သိုလှောင်ရုံကို ငှားထားတဲ့ပိုင်ရှင်ကြီးကလဲ ဆန္ဒတွေဖော်ထုတ်လို့ မာတေဇာကုန်လှောင်ရုံမှာ သာသနာ့အလံတော်ကို သွားရောက်ထောင်ပါသတဲ့…
နေရာတစ်နေရာကို လူတစ်ဦးတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကို တရားဝင်စာချုပ်နဲ့ ငှားရမ်းလိုက်ပြီးဆိုကတည်းက စာချုပ်သက်တမ်းမပြည့်မချင်း ငှားရမ်းထားသူအပိုင်ပါပဲ… ငှားရမ်းထားသူက ပိုင်ရှင်နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်ကို မဖောက်ဖျက်မချင်း ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ ဘယ်အရာမှ ဝင်ရောက်စီမံပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး… ဒါကားတစ်ချက်…
နောက်တစ်ချက်က နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးရဲ့ စံနှုန်းအရ…
မည်သည့် လူမျိုး… ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ ကိုမှ ဘက်လိုက်ထောက်ခံသော အပြုအမူဘာကိုမှ လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး… ဒါဟာ UN တွေရော NGO အားလုံးရဲ့ တူညီတဲ့ စည်းကမ်းတစ်ခု…
အဲဒီတော့ မာတေဇာက နိုင်ငံခြားသူက သူ့ငှားထားတဲ့သိုလှောင်ရုံကြီးမှာ သာသနာ့အလံတွေ့ခြင်းဟာ…
ပထမတစ်ချက်… အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘက်မလိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေသကို ချိုးဖောက်သလိုဖြစ်နေတယ်…
ဒုတိယအချက်… သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တဲ့နေရာမှာ ကန့်ကွက်တဲ့အပြုအမူဖြစ်တဲ့ သာသနာ့အလံထောင်ခြင်းဟာ အစိုးရကိုဆန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် အစိုးရနဲ့နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MOU) ထိုးထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ရာရောက်နေပါတော့တယ်…
ဒီအချက်နှစ်ချက်ကြောင့် အဆိုပါနိုင်ငံခြားသူက… သာသနာ့အလံတော်မြတ်ကြီးကို သူ့သိုလှောင်ရုံကနေဖြုတ်ချပြီး… သွေးရိုးသားရိုးပဲ အစောင့်ကို သိမ်းဆည်းခိုင်းတယ်လို့ UN နဲ့ NGO အသိုင်းအဝိုင်းမှာ မျက်မြင်သက်သေများနဲ့တကွ သတင်းပို့တာကိုရရှိခဲ့ပါတော့တယ်…
ကဲ… ဒီနေရာမှာ… အမှိုက်ကစပြီး ပြသာဒ်မီးလောင်ပါပြီး…
အရပ်ထဲမှာတော့ နိုင်ငံခြားသူက သာသနာ့အလံကို စကဒ်လိုဝတ်ပြီး လမ်းသလားသလိုလို…
အလံတော်ကိုဖြုတ်ချပြီး မဖွယ်မယာပြုလုပ်သလိုလိုနဲ့ အပျက်အပျက်ကနေ နှာခေါင်းသွေးအတောင့်လိုက် ထွက်ပြီး ကမ္ဘာမှာ ရွှေမြန်မာတို့ အရှက်ဗြန်းဗြန်းကွဲပါတော့တယ်…
ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၅သောင်းကျော်… တစ်ပူပေါ်တစ်ပူဆင့်သလို…
သောင်းဂဏန်းရှိတဲ့… ဝန်ထမ်းပေါင်းများစွာ… အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တော့မယ့်အနေအထားဆိုက်ရောက် သွားပါပြီ…
ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၅သောင်းကျော်ကို အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေးဌာနက ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်သလို… အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တော့မယ့် ဝန်ထမ်းသောင်းဂဏန်းကိုလဲ အစိုးရက အလုပ်ဖန်တီး မပေးနိုင်ပါဘူး…
စစ်တွေကို အခြေခံပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအများဆုံးတည်နေရာဖြစ်တဲ့… ဘူးသီးတောင်… မောင်တောဒေသ… ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပလက်ဝဒေသတွေရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ရပ်တန်းက ရပ်သွားပါပြီ…
နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ နယ်မြေခံ အိမ်ပိုင်ရှင်တွေ… ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကို UN နဲ့ NGO စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အလုပ်တွေကို လက်မခံဖို့… အိမ်တွေ ရုံးခန်းဖွင့်ဖို့ မငှားဖို့… အဖွဲ့အစည်းတွေကို ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချခြင်းမပြုဖို့အထိ ချိန်းခြောက်တာတွေ လက်ရှိငှားရမ်းထားသူတွေ… လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ လူစုချိန်းခြောက်တဲ့အဆင့်အထိရောက်ခဲ့ပါတယ်…
အဲဒီလိုပဲ… UN စတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးက ရခိုင်ဒေသကို လုံခြုံမှုအဆင့်တိုးမြှင့်လိုက်ပြီး… ငပလီနဲ့ မြောက်ဦးလိုလိုဒေသတွေကို နိုင်ငံတကာခရီးသည်များသွားရောက်ခြင်းကို လျှို့ဝှက်ကန့်သတ်ခဲ့ပါတယ်…
ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ… ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအပြင် နိုင်ငံတကာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ ဘာမှမရတော့ဘဲ… အထီးကျန်ဒေသတစ်ခုဆီကို ဦးတည်ပြီးသွားပါတော့တယ်…
အခုအချိန်မှာ စစ်တွေရဲ့ အိမ်ငှားခတွေဟာ အရင်ကထက် ၂ဆမက ခုန်တက်သွားပါတယ်…
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကို ငှားရမ်းရဲတဲ့ ပိုင်ရှင်တွေနဲသထက်နဲသွားလို့ပါ…
တစ်နည်းပြောရရင် စစ်တွေ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက် ပျက်သွားပါပြီ… ဒါဟာလဲ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် ကောင်းကျိုးလို့တော့ ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးဗျာ…
ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပေးဖို့ သူတို့ကို အစိုးရက တရားဝင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါ…
အဲဒီလိုပဲ… အစိုးရနဲ့နားလည်မှုသဘောတူစာချွန်လွှာလက်မှတ်ထိုးပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုကို လာရောက်ကူညီသူတွေအနေနဲ့… လူမှုအဖွဲ့အစည်းက လက်မခံရင်ဖြင့် သူတို့ဘက်က အောင်မြင်စွာ တပ်ခေါက်သွားရုံအပြင် နစ်နာမှုမရှိပါဘူး… ဒီနေရာမှာ မလုပ်ရလဲ တခြားနေရာတစ်ခုမှာ သွားလုပ်ရုံပါပဲ…
ဒီ ဘူးသီးတောင်… မောင်တောလိုဒေသတွေမှာပဲ NGO တွေအနေနဲ့ စုပြုံနေပြီး…
ဒါကတော့ Dry Zone လို့ခေါ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဒေသကို ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေသွားရောက် လုပ်ကိုင်ဖို့ အစိုးရအနေနဲ့ သိပ်ပြီးသဘောမတွေ့တာကို ကျွန်တော်တို့ သိရှိရပါတယ်…
ဘာ့ကြောင့်သဘောမတွေ့ဘူးလဲဆိုရင်… အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်တည့်တည့်မှာ ငတ်နေတယ်… ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတယ်ဆိုတာမျိုးကို အစိုးရ သိက္ခာအရ မဖြစ်စေချင်သမို့…
ရခိုင်ဒေသမြောက်ပိုင်း ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ်နဲ့ နယ်စပ်မှာပဲ… ဟိုဘက်ကလူလိုလို… ဒီဘက်ကလူလိုလိုနဲ့ ရောချပြီး အဟာရဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိဘူးတို့… အစာရေစာရှားပါးမှုတို့ကို ခေါင်းစဉ်တပ်ချင်လို့ပါ…
Dry Zone နဲ့ တခြားသောမြန်မာနိုင်ငံအပိုင်းမှာ ရခိုင်ဒေသထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအထောက်အကူအဖွဲ့တွေနည်းပါးရခြင်း ရဲ့ အကြောင်းအရင်းပါပဲ…
အဲဒီတော့ ရခိုင်ဒေသခံတွေကလဲ NGO တွေ UN တွေက ဒီနေရာမှာပဲ ဒီလူတွေကို ကူညီနေတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်မျိုးမြင်သထက်မြင်လာပါသေးတယ်…
ထပ်ရှိပါသေးတယ်… နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေလာတဲ့အခါ… အိမ်အကောင်းစားတွေငှားနေတယ်… ဟိုတယ်အကောင်းစားတွေမှာတည်းတယ်… ကားအကောင်းကြီးတွေစီးတယ်… ဆိုပြီး… ပြောဆိုကြတာလဲ ကြားဖူးကြလိမ့်မယ်…
လုံခြုံမှုမရှိတဲ့နေရာမှာ ရုံးခန်းဖွင့်ခြင်း၊ တည်းခိုးခြင်းကို သေချာစိစစ်တားမြစ်ပါတယ်… ဒါကလဲ သူ့ရဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပက ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကိုအလေးထားတာပါ…
ကားအကောင်းစားတွေစီးတယ်ဆိုတာ Parado တို့ Land Cruiser တို့လို Off-road ကားတွေ သုံးပြီးတော့ လုံခြုံတဲ့ခရီးသွားလာမှုကိုစီစဉ်ကြတာပါ… ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထဲမှာ အဲဒီကားမျိုးတွေကို ကားအကောင်းစားလို့ စာရင်းမသွင်းထားပါဘူး… ဒါဟာ လုပ်ငန်းသုံး Truck ကားတွေပါပဲ… ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကိုက Truck ကားပါပဲ…
Ferrari တို့ Lamborghini တို့လို ဇိမ်ခံပြိုင်ကားတွေသုံးတာမဟုတ်ပါဘူး… အဲ… ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်က သူဌေးလူတန်းစားက ဒီကားတွေကို ဇိမ်ခံစီးနေကြတော့ သူဌေးသုံးဇိမ်ခံကားလို့ ထင်နေတာအဆန်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့…
လာမယ့်ရှေ့တစ်ပတ်… ကျွန်တော် ရခိုင်ပြည်ကို တာဝန်အရခြေဆန့်ပါဦးမယ်…
ပျက်ဆီးသွားတဲ့ သိုလှောင်ရုံက ကုန်တွေကို လုံခြုံစိတ်ချရအောင်နေရချထားဖို့… အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့ ရုံးအသစ်ကို အခြေချဖို့ တာဝန်ယူထားပါပြီ…
နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ ပင်လယ်စာတွေနဲ့ လှပတဲ့ရှုခင်းတွေရှိတဲ့ ရခိုင်ပြည်ကို…
တစ်နေ့ ကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီး တိုးတက်မှုကို သက်ရှိထင်ရှားရှိချိန်မှာ မြင်ချင်ပါသေးတယ်…
တကယ်တော့ ရခိုင်ဒေသဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံသားတွေနေထိုင်ရာ အေးချမ်းသာယာတဲ့ နယ်မြေတစ်ခုသာ ဖြစ်စေချင်တာတစ်ခုပါပဲခင်ဗျား…
သတင်းတွေရဲ့ အခြေအမြစ် မှန်ကန်မှုဆီ မရောက်ခင်စပ်ကြား
ထိန်းမနိုင်သိန်းမရ တို ့ရှို ့ဆွ သတင်းမှားတွေကြောင့်
ဆူပူမှုတွေ ဖြစ် ဖြစ်လာတာမျိုးက ရင်နာစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်လာစေတာ. . .
အေးချမ်းသာယာသော ကျနော်တို့ ချစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နယ်မြေ အဖြစ်သာ မြင်ချင် ကြားချင်ပါတယ်ဗျာ
အချင်​းချင်​း ပွင်​့ပွင်​့ လင်​းလင်​း ​မေးချင်​​သေးသဗျ ကိုဝတုတ်​ သတိမထားမိ​သေးရင်​လဲ သတိထားမိ​အောင်​​ပေါ့ လူ​တော်​​တော်​များများ အမြင်​မှာ မြင်​​နေတာက ရခိုင်​ပြည်​နယ်​လို့​ပြောရင်​ Ngo နဲ့ ဘင်္ဂလီ ကိုပါ တွဲမြင်​​နေတယ်​ဗျ အဲ့ဒါ အများ အမြင်​ရှင်​း​အောင်​ ဘယ်​လိုလင်​းမလဲ ?????
ဒီနေရာမှာ နယ်ခြားမြို့တွေအကြောင်းကို နှိုင်းယဉ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ…
တာချီလိတ်ကိုရောက်တော့ တာချီလိတ်မြို့ပေါ်မှာ ထိုင်းဘတ်ငွေသုံးပါတယ်…
နယ်စပ်ကိုဖြတ်ပြီး မယ်ဆိုင်ဘက်ရောက်တော့… ဗမာအတော်များများ (အတော်တော်များတာနော်)
အဲဒီလိုပဲ မူဆယ်ရောက်ရင်လဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲပေါ့…
စီးပွားရေးပိုကောင်းပြီး လုပ်စားကိုင်စားကောင်းတဲ့နေရာကို ထိုထက်နိမ့်ကျတဲ့ အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်က
မရောက်ဖူးပေမယ့် ကြားဖူးတာရှိတာကတော့ အမေရိကနဲ့ မက်ဆီကိုမှာလဲ အဲဒီလိုရှိတယ်လို့…
အဲဒီမှာ ရခိုင်ပြည်နဲ့ နယ်စပ်ဖြစ်နေတဲ့ လူဦးရေထူထပ်ပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းတွေနဲပါးလာတဲ့…
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလူတစ်ချို့ နဲနဲပိုပြီး လုပ်စားကိုင်စားလို့ကောင်းတဲ့ မြန်မာပြည်ထဲ ခြေကျွံဝင်လာတာ…
ရှေးခေတ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြန်ကြည့်ရင်လဲ မဏိပူရတို့ အာသံတို့ဟာ မြန်မာမင်းပိုင်နက်တွေ ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်…
ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေ မြန်မာပြည်ထဲရှိနေတယ်ဆိုတာ အဆန်းတကြယ်မဟုတ်ပါဘူးလေ…
အဲဒီတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘင်္ဂလီလူမျိုးရှိနေတာ အခုမှမဟုတ်ပါဘူး… ကျွန်တော်တို့မမွေးခင်…
ကိုယ်နိုင်ငံထဲကို တရားမဝင်ခိုးဝင်လာတဲ့အခါ ဖြေရှင်းရမှာက…
အစိုးရရဲ့တာဝန်ပါ… ကိုယ့်တိုင်းပြည်စည်းရိုးကိုလုံအောင်ကာရမှာ အစိုးရအလုပ်ပါ…
လူမျိုးပေါင်းစုံစုဝေးနေထိုင်ကြတဲ့ စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမှာတောင် အိုဗာစတေးကို ကြိမ်ဒဏ်သတ်မှတ်ခဲ့တာ…
ဒါပေမယ့် နှစ်အတော်အတန်ကြာ ဆွေစဉ်မျိုးဆက်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ အခြေချနေထိုင်ပြီး…
မြန်မာနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ရပြီးသား… ဘင်္ဂါလီလူမျိုးအနေနဲ့… ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်…
ဘယ်ဘာသာကိုပဲ ကိုးကွယ်… ကိုးကွယ်… သူဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားပါပဲ…
အခု ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲအမြင်အရ… ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာ…
အခုလို မလိုလားအပ်တဲ့ပြသနာတစ်ခုပြီး တစ်ခုဖြစ်လာကြတော့တာပါပဲ…
အဲဒီတော့ ရှင်းပါတယ် ဆြာနီ…
ယိုးဒယားထဲကို မြန်မာကဝင်ပြီး ရေကြည်ရာမျက်နုရာရှာကြသလို…
တရုတ်ပြည်ထဲလဲ မြန်မာဝင်ပြီး ခိုးအောင်းကြရတာပါပဲ…
ဒီဘက်ကျတော့ သူတွေက ကိုယ့်ထက်ပို ချို့တည့်လေတော့…
ကိုယ်ဆီပြုံဆင်းလာရာကနေ သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးအရ သားဆက်ခြားရေးခွင့်မပြုလေတာက တစ်ကြောင်း…
ဆင်းရဲသားတို့ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဇိမ်ခံရာကနေ… လူဦးရေတိုးပွားနှုန်းမြင့်မားလာတော့…
ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံမို့ ပိုသိသာရာကနေ… ရခိုင်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဟာ ဘင်္ဂါလီများကြီးစိုးသလို…
တကယ်တော့ China Town ဆိုတာလဲ ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲကိုး…
အဲ့ကြားထဲ ခဏခဏ အဓိကရုန်းတွေကဖြစ်ဖြစ်နေတော့ ရခိုင်ဆိုတာနဲ့ ဘင်္ဂါလီကို တွဲမြင်ကြတော့တာပေါ့…
အဲဒီကြားထဲမှာ လဒ်လာဘကြောင့်ဖြစ်စေ… နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်ကြောင့်ဖြစ်စေ…
စည်းရိုးပေါက်ခဲ့… အစိုးရတာဝန်မကြေခဲ့လေတော့… အခြေအနေဆိုးကို ရောက်မှန်းမသိရောက်ခဲ့တာပါပဲ…
ဒီနေရာမှာ တကယ်တာဝန်ရှိခဲ့တာ အရင်စစ်အစိုးရနဲ့… အခု မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ သိန်းစိန်အစိုးရပါပဲ…
ဒါဟာ… ဘာသာရေးမဟုတ်ပါဘူး… လူမျိုးရေးမဟုတ်ပါဘူး…
ကိုယ့်အစိုးရအသုံးမကျခဲ့တာ… နိုင်ငံသားတွေအတွက် စည်းရိုးသေချာမကာပေးခဲ့တဲ့ ဖလမအစိုးရရဲ့တာဝန်ပါ…
ဒီတာဝန်ကို ကျုပ်တို့တာဝန်ယူစရာမလိုပါဘူး… မဘသဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးလဲ ခေါင်းဝင်ခံစရာမလိုပါဘူး…
အစိုးရကို ခေါင်းခံခိုင်းဖို့ တာဝန်ယူပေးဖို့ ဖိအားပေးရမှာပါ…
အခုတော့ လုပ်ပုံကိုင်နည်းတွေ လွဲကုန်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ…
ဆြာနီ အမေးရှိလို့ ကျွန်တော်အဖြေရှိလိုက်တာ ပိုစ်တစ်ပုဒ်စာဖြစ်သွားလို့
အဲဒီနေရာမှာ ဘင်္ဂါလီနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွဲပြီဆိုတော့…
NGO က ပေါင်မုန့်နှစ်ချပ်ကြားကချိစ်… ပဲကြီးလှော်ကြားက ဆား…
NGO တိုင်းဟာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကြပေမယ့် လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမတူကြပါဘူး…
တစ်ချို့ NGO တွေက အဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကြတယ်…
တစ်ချို့က ရေရရှိရေး… တစ်ချို့က စိုက်ပျိုးရေး… တစ်ချို့က ကျန်းမာရေး… စသည်ဖြင့်
အမျိုးမျိုးကွဲပြားလုပ်ကိုင်ကြတဲ့အတွက်… NGO တွေဟာ နေရာဒေသကွဲပြီး အစိုးရဆီကနေ လုပ်ကိုင်ခွင့်တွေ့ရကြပါတယ်…
အဲဒီလိုပဲ တချို့ အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလဲ ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက် အလှူငွေချပေးတယ်ဆိုတာမျိုးရှိပါတယ်…
အဲဒီလိုလုပ်ကိုင်ခွင့်ရကြတဲ့နေရာမှာ ဘူးသီးတောင်… မောင်တောဒေသက စိုက်ပျိုးရေးအရရော… အဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရရော… ရေနှင့် တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုအရရော အဖက်ဖက်က လိုအပ်တဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ကို NGO တွေအနေနဲ့ စုပြုံဝင်ရောက်တယ်ဆိုတာ မဆန်းပါဘူး…
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသမှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ကိုင်လိုပေမယ့် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အလှူငွေတွေကို အသုံးပြုခွင့်မရတာ…
အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရတာတွေကြောင့် Dry Zone လို့ခေါ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကို
ရခိုင်ဒေသလို… NGO တွေက ဘင်္ဂါလီတွေကိုပဲကူညီနေတယ်…
သူတို့ဒေသခံ ရခိုင်တွေကို ကူညီမှုမပေးဘူးဆိုပြီး အော်ဟစ်တဲ့နေရာမရှိပါဘူး…
ချင်းပြည်နယ်လို… ကယားပြည်နယ်လို… ကချင်လို… ရှမ်းလိုနေရာတွေမှာ ဒီလိုမအော်ကြပါဘူး…
နောက်တစ်ခုက ကချင်ပြည်နယ်တို့ ရှမ်းပြည်နယ်တို့နေရာတွေမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ NGO တွေက ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးထက် HIV / AIDS Project တွေ…
ဒါ့ကြောင့် NGO နဲ့ ရခိုင်ဆိုတာ ခွဲမရတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီး…
ရာခိုင်နှုန်းအရ… ပိုဆင်းရဲသော… ပိုပြီးအာဟာရချို့တည့်သော… မိသားစုများသော…. အရေအတွက်ပိုများသော ဘင်္ဂါလီမိသားစုများက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ NGO တွေကူညီမှုပိုရနေတယ်လို့…
မြင်နေကြတာဟာလဲ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပါ… ဆြာနီရေ…
အာဏာရှင် phobia ကနေ၊ အစ္စလာမ် phobia ဖြစ် အဲ့ဒီကနေ ဒီမိုကရေစီကို တလွဲ သဘောပေါက်သွားပြီး ရခိုင်သားတွေ ကြောက်သွားမှာ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ အဲ့လို့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ လူတစ်စုကလည်း ရှိနေတာကိုး
NGO စခန်းကို ဖျက်လိုက်ကြတယ် လို ့
ရခိုင်ပြည်ကို အဖတ်ဆယ်ပါ တဲ့
တိုင်﻿﻿းပြည်﻿﻿အ﻿﻿နေနဲ့ နှစ်﻿﻿၅၀﻿﻿ကျော်﻿﻿မှာ ဒီတစ်﻿﻿ကြိမ်﻿﻿ပဲ လမ်﻿﻿း﻿﻿ကြောင်﻿﻿းမှန်﻿﻿နားကပ်﻿﻿လာတယ်﻿﻿လို့မြင်﻿﻿တယ်﻿﻿။
ကိုယ်﻿﻿အတွက်﻿﻿မဟုတ်﻿﻿﻿﻿တောင်﻿﻿ ကိုယ်﻿﻿့သားသမီး﻿﻿မြေးမြစ်﻿﻿﻿﻿တွေအတွက်﻿﻿ အခွင်﻿﻿့အ﻿﻿ရေးကိုရ﻿﻿အောင်﻿﻿ယူနိုင်﻿﻿မှဖြစ်﻿﻿မယ်﻿﻿။
အ﻿﻿နောက်﻿﻿တစ်﻿﻿ခါးကိုဘယ်﻿﻿လိုပိတ်﻿﻿မယ်﻿﻿၊ အ﻿﻿ရှေ့တံခါးကိုဘယ်﻿﻿လိုဖာမလဲဆိုတာ အ﻿﻿ဖြေရှိပါတယ်﻿﻿။ အခုလိုလုပ်﻿﻿﻿﻿နေတာ အ﻿ဖြေရှာတာမဟုတ်﻿ဘူး။
ဒီမီး﻿﻿တွေမငြိမ်﻿﻿းသ﻿﻿ရွေ့ ရခိုင်﻿ပြည်﻿ဖွံ့ဖြိုးနိုင်﻿မှာဟုတ်﻿သလို ရခိုင်﻿﻿သား﻿﻿တွေရဲ့ ဘဝရပ်﻿တည်﻿ဖို့ပိုခက်﻿လာမယ်﻿။ အဲလိုဆိုရင်﻿﻿ တိုင်﻿﻿းပြည်﻿﻿ကိုအထိနာ﻿﻿စေတယ်﻿﻿။
တစ်﻿﻿နိုင်﻿﻿ငံလုံး﻿﻿ပေါင်﻿﻿းမှ သန်﻿﻿း၆၀﻿﻿ကျော်﻿﻿ရှိတာ လူမျိုးတစ်﻿﻿မျိုးချင်﻿﻿းခွဲပြီး﻿﻿ရေကြည်﻿﻿့ရင်﻿﻿ ဘယ်﻿﻿လောက်﻿မှရှိတာမဟုတ်﻿ဘူး။
လက်﻿﻿ရှိအ﻿﻿ခြေအ﻿﻿နေ လက်﻿﻿ရှိပြုမူပုံ﻿﻿တွေက လူတစ်﻿﻿စုကလွဲလို့ ဘယ်﻿﻿လူမျိုးကိုမှအကျိုးမပြုဘူးဆိုတာ မြန်﻿မာနိုင်﻿ငံသားအားလုံးသတိပြုမိ﻿﻿အောင်﻿﻿ အမုန်﻿﻿းခံ﻿﻿ထောက်﻿﻿ပြ﻿﻿ပေး﻿﻿နေတဲ့သူ﻿﻿တွေရှိတဲ့ ဂဇက်﻿﻿ကို ﻿ကျေးဇူးပါ။
ကျုုပ်တော့ အဲ့မှာ နေလာတာ ကြာတော့ အဲ့အကြောင်း အသိဆုံးလို ့တော့ မပြောချင်ပါဖူးဂျာ…
သို ့ပေသိ… ကိုကြီး ကြောင်ဝတုတ် ပြောတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ကျိန်စာက လွတ်မြောက်ဖို ့လမ်းမမြင်ပါ…..
အခုအထိပေါ့…….. (အရင်းစစ်ရရင်… ရခိုင်တွေ သည်းတာလည်း ပါသလို အစိုးရကလည်း ရခိုင်ကို ကုလား နဲ ့လှည့်ရန်တိုက်… တရုတ်ကို ကြားကနေ အသာလေးထိုးထည့်… ပီးတော့ အဆီတွေစုတ် နေတာ….)
အဲ့ အလံပြသာနာကလည်း တကယ်တော့ လိမ်ဆင်….. နောက်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်ပါတယ်… အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ ဒီမိန်းမ အလံတတ်ဖြုတ်ပီး…. အလံကကြီးတော့ အိတ်ထဲ မဆန် ့လို့ခါးကြားညှပ်ပီး ဆင်းလာမယ်လို ့… လူတယောက်က အဲ့ဒါကို အမြင်မှားတာနေမှာလို ့……..
နောက်ပီ အွန်လိုင်းက ကင်မရာမန်းသမား ပြောပြချက်အရ…. စစ်တွေကို ကင်တားနားလာတုန်းက ဗလီ ထဲဝင်ပီး ဝတ်ပြုသွားပါတယ်ဆိုပီး…. လေဆိပ်မှာ မိန်းမ တယောက် လိုက်ဖွတယ်…. လူတွေကလည်း အဲ့ဒါကို ယုံကြတယ်…. ကင်မရာမန်းက သူက ဟို လူ ့နောက်ကနေ တောက်လျှောက် လိုက်လာတာလေ…. သူ မြင်တာပေါ့… ကင်တားနား တကယ် ဝတ်ပြု မပြုဆိုတာ… အဲ့ဒါကို ဖွနေတဲ့ အမကို မဟုတ်ဖူးလို ့သွားပြောတော့… ဟိုမိန်းမက သိပါတယ်… နင်တိတ်တိတ်နေတဲ့… ကိုင်း… အဲဒါပဲ ကြည့်တော့…… ဖွချက်….
ထိလွယ် ရှလွယ်တွေကို ဘယ်လို ချည်းကပ် ဖြောင်းဖျ သိမ်းသွင်းယူမလဲ ဆိုတာ တကယ့်ကို အရေးကြီးတဲ့ ခေါင်းစဉ် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ။
ဒီလိုပြော ဒီလို ရေးရုံ နဲ့ နားလည်ဖို့ ဆိုတာ အမတန်ခဲယဉ်းပြီး တစ်ဘက်စွန်းကိုသာ ဆက်လက်ချည်းကပ်သွားပါလိ်မ့်မယ် …
နိုင်ငံခြားသား တွေ နဲ့ အလုပ်လုပ်သူမို့ နိုင်ငံခြားသား တွေဘက်က နာတယ်လို့ဘဲအမြင်ထွက်လာပါလိမ့်မယ် .. ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာပါ ..
အေးစပြု နေတဲ့ ကိစ္စ….. မီး တစ ပြန်မဖြစ်အောင်ဆိုတာ တခါတလေ ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းကလည်း တန်ဖိုးရှိတတ်ပါတယ် ..
ရန်ကုန်မြို့လို မြို ့ကြီးမှာ လုံခြုံ မှု မရှိလို့ ဦးညွန့်တင်ပိုင် နန်းတော်လို အိမ်မျိူးမှ ငှါးနေရတာလား ..
ပြောတတ်လိုက်တာနော် .. ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုံခြုံ ရေးအတွက် …
အစ်ကိုကြီးက ကျွန်တော့်ကို အဲ့လိုပြောလိုက်တော့….
ကျွန်တော်တောင် သံတွဲသားတွေအုပ်စုထဲ ခြေချမိသလိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာ…
ကျွန်တော် ဒီအကြောင်းကို ဂဇက်မှာရေးချင်တာကြာပါပြီ…
အဲ့အချိန်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲ လုံခြုံရေးအတွက်…
ဒီအကြောင်းကို ပြောခွင့်ဆိုခွင့်မလုပ်ဖို့ တားမြစ်ခံထားရတဲ့အခြေအနေရှိသမို့…
မပြောဖြစ်ဘဲ… အခုလို အခြေအနေတည်ငြိမ်သွားမှာ ဂဇက်ထဲမှာပြောဖြစ်တာကိုတော့
မပြောမပြီး… မတီးမမြည်မို့… ပြောလိုက်တီးလိုက်တာပါ…
ကျွန်တော်တို့ ဂဇက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလဲ ဒီ Update သတင်းတွေကြောင့်ပါ…
ဂဇက်ကြီးလဲ သတင်းမရှိတော့ အချစ်အကြောင်းပြောတဲ့ဆိုဒ်လိုလို… ရသဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားပါပြီ…
သူကြီးဖြစ်ချင်တာ… ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်…
မယုံရင် အချက်ကောင်းစောင့်ပြီး မီးလောင်တိုက်သွင်းတတ်တဲ့သူကြီးကိုပဲကြည့်ပါလေ…
နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်လို့ သူတို့ဘက်ပါတယ်လို့ပြောရရင်…
ကင်းဝန်မင်းကြီးကို စုဖုရားလတ်က သနပ်ခါးနဲ့ ကျောက်ပြင်ပို့ခိုင်းတာလေး သတိရသဗျ…
နိုင်ငံတကာအမြင်ရှိတဲ့ ကင်းဝန်မင်းကြီးကို နန်းတော်ထဲက အမြင်မရှိတဲ့ မိဖုရားတစ်ပါးကစော်ကားတာ
ကျွန်တော်တို့တတွေက ကိုယ့်အမြင်ကိုဂရုစိုက်ရမယ့်အချိန်ထက်… တခြားနိုင်ငံသားတွေ… တခြားနိုင်ငံတွေက…
ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာ ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်…
ကိုထူးဆန်းကြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာကို ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်…
ငါတို့ကို သူတို့က ဒီလိုမြင်နေပါလားဆိုတာ သိစေချင်လို့ပြောစရာရှိရင် ကျွန်တော်ပြောတတ်တာပါ…
ကိုထူးဆန်းက အိမ်ငှားတဲ့ကိစ္စပြောတော့ ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတချို့ပြောရတာပေါ့…
ဒီလိုဗျာ… ကျွန်တော် Logistic သက်တမ်းမှာ ရုံးပြောင်းခဲ့တာ… ရုံးသစ်ရှာခဲ့တာ… ရုံးဟောင်းပိတ်ခဲ့တာ…
ရန်ကုန်ရုံးဟာ တကယ်တော့ NGO တွေအတွက် နယ်ရုံးတွေက ပေးစာကမ်းစာနဲ့ဖွင့်တဲ့ရုံးပါ…
ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန် Support Team အတွက် ရုံးခန်းနေရာနဲ့ ရန်ကုန်နေ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လစာအားလုံးက… နယ်ရုံးတွေရဲ့ Budget ထဲကနေ သုံးရတာပါ…
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် Donor (အလှူရှင်အဖွဲ့)တွေက Project လုပ်ဖို့အတွက် Budget ချပေးပါတယ်…
အဲဒီအထဲမှာ ၁၅% ကိုပဲ ရုံးခန်းနေရာနဲ့ ဝန်ထမ်းလစာတွေသုံးခွင့်ရှိပါတယ်…
ဒါကတော့ NGO တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူသလို… လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကွဲတာတွေလဲရှိပါတယ်…
အဲဒီတော့ Project များများရပြီး Budget များများရတဲ့ NGO တွေက အလှူငွေစုစုပေါင်းရဲ့ ၁၅% ကို ရုံးခန်းငှားစရိတ်… ဝန်ထမ်းလစာတွေအတွက်သုံးကြပါတယ်…
အဲဒီ Project ပြီးသွားရင် ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြသလို… ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေထဲက လျော့ချမှုတွေရှိပါတယ်…
အဲဒီတော့ ၈၅% သော အလှူငွေတွေက Beneficiary (အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ)တွေဆီ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရောက်ပါတယ်…
ပုံစံမျိုးစုံဆိုတဲ့အထဲမှာ Transportation တွေ… Office Running Cost တွေ… အလုပ်သမားငှားခတွေ အားလုံး ပါဝင်ပါတယ်…
ဒါပေမယ့် အဲဒီအထဲမှာ ဝန်ထမ်းလစာနဲ့ ရုံးငှားစရိတ်တွေမပါပါဘူး…
နယ်မြို့တွေမှာ လုံလောက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေခန့်ပြီး ရုံးနေရာငှားပြီး ပိုတဲ့ပိုက်ဆံကို ရန်ကုန်ရုံးကယူပြီးတော့
ရုံးခန်းငှားတဲ့နေရာမှာ… လူအင်အားပေါ်ကြည့်ပြီး အိမ်ငှားရပါတယ်…
လူအင်အားများတဲ့ဆန့်မယ့်အိမ်… နောက်တစ်ခုက Medical Store လိုမျိုး ဆေးသိုလှောင်ရုံတွေထားလို့ရမယ့်နေရာ… ကိုယ့်ရဲ့ Supplier တွေ ကိုယ့်ဆီအလွယ်တကူလာလို့ရမယ့်နေရာ… Internet Connection တို့ တယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေ အလွယ်တကူရှာလို့ရမယ့်နေရာမျိုးဖြစ်ရပါတယ်…
နောက်တစ်ခုက နယ်မြို့အားလုံးကနေ ပျက်လို့လာပြင်မယ့်ကားတွေ ထားဖို့နေရာလိုပါတယ်…
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် အဲဒီကားကို ခိုးယူပြီးရာဇဝတ်မှုကြူးလွန်မှာစိုးရိမ်လို့ပါ…
အဲဒီတော့ လျှပ်စစ်မီးမှန်မယ့်နေရာ… လုံခြုံရေးအားကောင်းတဲ့နေရာကို ရန်ကုန်မြို့မှာရှာကြည့်ရင်…
နောက်တစ်ခုက နိုင်ငံတကာက လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို အပြည့်အဝတာဝန်ယူနိုင်တဲ့
ဒီအချက်တွေကို ကြည့်ပြီးတော့ နေရာကိုရွေးပါတယ်…
အခုအချိန်မှာ အိမ်ငှားစရိတ်တွေတက်သထက်တက်လာလို့… NGO တွေအားလုံးလဲ ရွှေတောင်ကြားကထွက်ဖို့ လုပ်နေကြပါပြီ… လိုအပ်ချက်ကိုက်ညီသမျှနေရာတွေကို ရွှေ့ပြောင်းလာကြပါပြီ…
တောင်ဥက္ကလာဖက်ကိုတောင် တချို့သော NGO တွေပြောင်းရွှေ့ကုန်ပါပြီ…
NGO တွေဟာ ရွှေတောင်ကြားကမထွက်တာမဟုတ်ပါဘူး…
သူတို့ရတဲ့ Budget နဲ့မကိုက်ရင်ထွက်ကြတာချည်းပါပဲ…
UN လိုအဖွဲ့တွေတောင်… ရုံးငယ်လေးတွေပေါင်းပြီး ထပ်မြင့်ကွန်ဒိုငှားပြီး ရုံးဖွင့်နေကြပါပြီ…
ကျွန်တော်တို့ ပြောတဲ့ Security ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်ဆီသေနတ်နဲ့လာပစ်မှမဟုတ်ပါဘူး…
အရေးအကြောင်း မီးလောင်ရင် အမြန်ဆုံး မီးသတ်ကားလာနိုင်တဲ့နေရာ…
ကိုယ့်ရဲ့ Visibility Item (ကား၊ အလံ၊ ပိုစတာ၊ တီရှပ်)လိုမျိုးတွေ အလွယ်တကူခိုးယူနိုင်မယ့်နေရာမျိုးအပြင်…
နိုင်ငံတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ရင် လေဆိပ်တို့… UN ရုံးဝင်းထဲ သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးတစ်ခုထဲကို အမြန်ဆုံးနဲ့ အနီးဆုံး သွားနိုင်မယ့်ဟာမျိုးတွေကိုပါ ထည့်စဉ်းစားရပါတယ်…
ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ NGO တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ပေးနိုင်မယ့်နေရာ
တကယ်တော့ NGO တွေရဲ့ ၁၅% ဆိုတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ ခွင့်ပေးရင် မြေတောင်ဝယ်အိမ်ဆောက်နေလို့ရပါတယ်…
ဒါပေမယ့် တချို့ NGO တွေဆိုရင် ဌာနပိုင်ကားဝယ်ခွင့်မပေးထားပါဘူး… ငှားသုံးခွင့်ပဲရပါတယ်…
အိုက်ဒါဘာလဲလို့ပြောရရင် Income Sharing ပါတဲ့…
နောက်တစ်ခုက Audit ပါဗျာ…
NGO တွေဟာ အလှူငွေများများရရင် အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေများလာရင် Audit အစစ်ခံရပါတယ်…
ဘယ်လိုလူတွေက Audit စစ်သလဲလို့ဆိုရင်… ကိုယ်ပိုင် HQ ကနေ တစ်နှစ်တစ်ခါ စစ်ပါတယ်…
အလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေက အလှူရှင်ပေါ်မူတည်ပြီး တစ်နှစ်တစ်ခါ ဒါမှမဟုတ် တစ်နှစ်နှစ်ခါစစ်ပါတယ်…
အကျိုးအကြောင်းမခိုင်လုံရင် လွယ်လွယ်နဲ့လဒ်ထိုးလို့ရတဲ့ အစိုးရ Audit များထင်နေသလား…
တစ်ခါမေး တစ်နာရီနဲ့ (၃)ရက် ဆက်တိုက်လောက် ခေါင်းအခြောက်ခံအလုပ်လုပ်ပါတယ်…
အဲဒီတော့ NGO တွေက ကျန်တဲ့ ၈၅%အပေါ်မှာ ဘုန်းလို့ရမယ်လို့များထင်ပါသလားဗျာ…
ပြည်သူမထောက်ခံ…လူထုမချစ်ဘဲ… အာဏာအတင်းယူထားတဲ့ ကြံဖွံ့ရုံးချုပ်ကြီးကို ဘယ် Budget နဲ့များ…
အဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုအကျိုးအကြောင်းတွေနဲ့ ဖွင့်ထားလဲလို့မေးခွန်းအရင်မေးကြည့်ကြစမ်းပါဗျာ…
ကြံ ့ဖွံ့ ရုံးလေး တစ်ခု များမေးနေရသေးလားကွာ .. တနိုင်ငံလုံးလုပ်ချင်ရာလုပ်ထားတာကို .. ဒါကြောင့်လဲ ပြည်သူ ချစ်စိတ်မရ မုန်းစိတ်ဘဲ ရခဲ့တာပေါ့ .. ဟုတ်ဘူးလား ..
အဲ့ဒီလိုဘဲ ngo တွေ ကိုယ့်ကိုလာပြီး လှုပါတယ်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ အပေါ် ချစ်စိတ်မရှိကြဘဲ မုန်းစိတ်ဖြစ်ကြတာ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတာတော့ ngo တွေ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားသင့် ပြီလိုဘဲ လူပိန်းအတွေးနဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတွေးမိပါတယ် ။
ဘယ်လောက်ကြီးဘဲ သွေးထိုးထိုး ဘယ်လောက်ကြီးဘဲ အမြှောက်ခံရခံရ အများစု အမြင်မှာ အဲ့ဒီလို ဖြစ်နေပြီဆိုရင် တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ ..
ကြောင်ဝတုတ်ရေ .. ကျန် တဲ့ ၈၅ % ပေါ်မှာ ဘုံးလို့ ရပါ့မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတော့ မမေးပါနဲ့ကွာ .. bill နှစ်ခု ပေးရတာတွေ ကို်ယ်တွေ့မို့လို့ အဲ့ဒီ့ ကို မသွားကြရအောင်လား .. (ကိုယ်လဲ အလွဲသုံးစားမှုထဲ အလိုအလျောက် ကြံရာပါဖြစ်သွားတာဘဲလေ)
နိုင်ငံခြားသူကြီး သွေးရိုးသားရိုးနဲ့ အလံဖြုတ်ချတယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော် ၁၀၀% ယုံကြည်ပါတယ် …
ဒါပေမဲ့ ကြောင်ဝတုတ်ပြောသလို ဘယ်လိုကြောင့် စည်းမျဉ်းတွေကြောင့် ဖြုတ်ချတာပါဆိုတာတော့ သူဖြုတ်တဲ့အချိန်မှာ တွေးမယ်လို့ မထင်ဘူး ။။ ငါ ငှားထားတဲ့ အိမ် ဂိုဒေါင် ဘာကြောင့် လာတပ်ရတာလဲဆိုတဲ့ အတွေးဘဲ ရှိမယ်ထင်ပါတယ် ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ငါတို့ စည်းကမ်း နှစ်ချက်နဲ့ မညီလို့ ဆိုတဲ့ အတွေးတွေး ရင် ငါကိုယ်တိုင်တက်ဖြုတ်ရင် ငါ့ကို ဒေသခံတွေ အမြင်တိမ်းစောင်းသွားနိုင်တယ် ဆိုတာကိုပါ တွေးရမှာပေါ့ .. ပြဿ နာ ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှသာ ပေးတဲ့ ဆင်ခြေလို့သာ ရှုမြင်ပါတယ် ။ ထားတော့ ။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ပြဿ နာ က တော့ ဖြစ်သွားပြီ ..ဘယ်လို နောင်မဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်ကြမလဲ ဆိုတာက တော့ ကြောင်ဝတုတ်ရော ကျွန်တော်တို့ ရော အားလုံးဖြစ်စေချင်တဲ့ ” မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံသားတွေနေထိုင်ရာ အေးချမ်းသာယာတဲ့ နယ်မြေတစ်ခုသာ ဖြစ်စေချင်တာတစ်ခုပါပဲခင်ဗျား…”
NGO တွေကို သဘောမကျတာ… NGO တွေကိုရန်လိုတတ်တာ…
ဘာဖြစ်လို့များ ရခိုင်ဒေသတစ်ခုထည်းပဲရှိနေလဲလို့တော့ ကျွန်တော်စဉ်းစားသဗျ…
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ အလယ်ပိုင်း Dry Zone, ကချင်… ကရင်… မွန်… တနင်္သာရီ… ချင်း… ရှမ်း… ကယား… အားလုံးမှာရှိပါတယ်…
ဘယ်တုန်းကမှ ရခိုင်ဒေသလို ပြသနာမဖြစ်ခဲ့ဖူးပါဘူး…
ရွာထဲသွားရင် အပြုံးတွေနဲ့… ကြိုလျက်ပါ… စကားတွေဖောင်ဖွဲ့အောင်လာပြောတုန်းပါ…
အစ်ကိုကြီးပြောသလို Bill ၂စောင်ပေးရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်လဲ Logistic မို့သိပါတယ်…
Bill ၂စောင်က NGO မှ ပေးရတာမဟုတ်ပါဘူး… များသောအားဖြင့်…
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလဲ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တစ်ခုနဲ့မို့ ဒါကိုသိသပေါ့…
အလံတော်ကိစ္စတော့ NGO ထဲမှာနေတဲ့သူမို့…
NGO အားလုံးဟာ Security ဆိုတဲ့အကြောင်း ထောင်းလမောင်းကျေအောင် ကြားနေရ…
NGO တွေရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက အရင်ဆုံးစဉ်းစားကြတာ Security ပါပဲ…
အဲဒီအတွက်… လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်တယ်လို့ Logistic တစ်ယောက်မြင်နဲ့
တခြားအမြင်အပြင် စကားများစရာကနေ ကားသွားလို့ ထဖြစ်တဲ့ပြသနာပါပဲ…
ရန်ကုန်မှာ ၉၆၉ တံဆိပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အေးအေးဆေးဆေးဖြေရှင်းခဲ့တာတွေ…
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ကြုံဖူး… လုပ်ဖူးပါတယ်… သို့ပေမယ့်…
တကယ်တော့ ဒီလိုအကွက်ကို စောင့်နေတဲ့… မဖြစ်ဖြစ်အောင်တွန်းပို့နေတဲ့…
အခြေအနေတွေ… လုပ်နေတဲ့လူတွေ… ဒီအခွင့်အရေးကိုစောင့်နေတဲ့လူတွေ… ရှိတယ်ဆိုတာ… ရခိုင်ဒေသက နိုင်ငံသားတွေရော… အားလုံး မဖြစ်မနေသိပြီး…
ကျွန်တော် ဂဇက်ထဲက သူငယ်ချင်းတချို့ကိုပြောဖူးပါတယ်…
မြောက်ဦးနဲ့ စစ်တွေဘက် အလည်အပတ်စီစဉ်ပေးမယ်… သွားကြရအောင်လို့…
အခုတော့ ဒီအစီအစဉ်လေးက ဝေးဦးမယ်ထင်ပါ့ဗျာ…
သူတို့လည်း ခံရတာ ကြာလာတော့ ပေါက်ကွဲတော့တာပေါ့ တဲ့..
ဒါပေမယ့် အခု ဖြစ်နေတာက အဲဒီလို ပေါက်ကွဲစေချင်လို့ တမင်လုပ်နေတာတွေလေ… ဒါတွေကို အားလုံးသိပြီး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ဖြစ်စေချင်တာပါပဲ.. မလွယ်တော့ မလွယ်ဘူးပေါ့လေ.. အနော်တို့တောင် ကြားမိရုံနဲ့ စိတ်တိုပြီး ပါးစပ်က လွှတ်ကနဲ ပြောမိသေးတာပဲ.. တကယ်တမ်း ခံစားနေရတဲ့သူတွေကိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်.. ဒါပေမယ့်လည်း တစ်သက်လုံး သည်းခံလာပြိးတော့မှတော့ ဒီအချိန်မှာ ပိုပြီး ထိန်းသိမ်းသင့်တယ် ထင်တာပဲလေ…
ပြောပြန်ရင်လဲ ဆဲခံရမယ်ထင့်။ ပြောချင်တာတွေကလဲများသားလားနော်။ အနောက်တံခါးကို ကာကွယ်နေတာလား။ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုပ်တာခံနေကြရတာလားဆိုတာ သူတို့တောင် သဲသဲကွဲကွဲ သိပုံမရဘူး။ ဒေါက်တာအေးမောင်ပြောဖူးပါတယ်။ သူတို့ရခိုင်တွေဟာ ဗဟုသုတနဲပါးတော့ တွေးခေါ် ဆင်ခြင်တုံတရားအားနည်းတယ်တဲ့။ အဲ့ဒါတော့အမှန်လို့ထင်ပါတယ်။ တခုခုသတင်းလေးလွှင့်လိုက်တာ နဲ့ ဆွဲမယ် ဖြဲမယ် ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲနဲထိန်းစေချင်ပါတယ်။ တကယ်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာလေး ဝေဖန်စီစစ်ပြီး လူမျိုးကြီးဆန်ဆန်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် ကြားထဲကလဲသွေးခွဲလို့မရသလို ဘင်္ဂါလီတွေလဲ နှိပ်စက်နေ ဘာတယ်၊ မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခံနေရပါတယ်လို့ တစာစာအော်ပြီးနေ ရာတောင်းနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး လို့ထင်မိပါတယ်။ နင်တို့နေကြည့်ပါလားဆိုတဲ့စကားတခွန်းနဲ့ အမြဲပြောခံနေရတာ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကော အဲ့မှာနေသလားလို့မေးရင် ဒီနှစ်ထဲ ရန်ကုန်ကိုရခိုင်တွေ ဘယ်လောက်ရောက်လာသလဲ ဆိုတာတွေ့နေရတာမို့ ရခိုင်မှာ ရခိုင်တွေတောင်ကျန်ပါ့မလား လို့စိတ်ပူမိပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ တိုက်တွေကားတွေနဲ့နေပြီးမှ ငါတို့က အနောက်တံခါးကိုမကာကွယ်ရင်နင်တို့ ကုလားမယားဖြစ်ပြီဆိုတာ မျိုးပြောတာတော့ခံရခက်သား။ တကယ်ကာကွယ်နေတဲ့သူတွေလဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နည်းလမ်းတကျကာ ကွယ်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာတောင် မသိလိုက်ဘဲ အသာလေးပြီးနိုင်တဲ့ပြသနာပါ။ ခုလိုမင်းမဲ့စရိုက်တွေနဲ့ ကာကွယ်မှ နည်းလမ်းမှန်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးလဲသိစေချင်ပါရဲ့။
NGO တွေကောင်းသလားဆိုတော့ မကောင်းဘူးလို့မြင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့မရှိရင်ကောဖြစ်လား ဆိုတော့ မဖြစ်ဖူးလို့လဲ မြင်ပါတယ်။ သူတို့ဆီအလှုတွေ၊ ပိုက်ဆံတွေပေးရင် အနဲဆုံးတဝက်တော့ ဒုတ်ခသည်တွေ ဆီရောက်နိုင်ပါတယ်။ အစိုးရဆီပေးလိုက်ရင်တော့ တပြားမှရောက်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက် သူတို့ကလဲ ရှိသင့်တဲ့၊ လိုအပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေတာပါ။ တကယ့်ကို စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်တဲ့ NGO တွေရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ခုတမျိုးတော်ကြာတမျိုးဥပဒေတွေနဲ့ အသားမကျပဲ ပြသနာတက်တဲ့ NGO တွေလဲတွေ့ဖူးပါတယ်။
ရခိုင်ဘက်ရောက်တိုင်း… ငပလီကမ်းခြေကို လေယာဉ်ပျံပေါ်က မြင်ရတိုင်း…
သာယာလှပပြီး… ကျေးလက်အငွေ့အသက်မပျောက်သေးတဲ့ ကမ်းခြေအဖြစ်…
စစ်တွေရောက်လို့ View Point မှာထိုင်ရင်း ပင်လယ်ပြင်ထဲက မီးပြတိုက်ကို ငေးကြည့်ရတဲ့
ပုဂံပြည်ထက်ရှေးကျတဲ့ မြောက်ဦးကိုရောက်တော့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဒေသတစ်ခု…
အဲဒီခံစားမှုရတိုင်း မြန်မာပြည်တွင်းမှာ တိုးတက်မှုနောက်အကျဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်နေတာကို
မြင်ရတိုင်း ပြန်စဉ်းစားမိတိုင်း ကျွန်တော့စိတ်ထဲမှာ အေးချမ်းသာယာတဲ့ရခိုင်ဒေသအဖြစ်ပဲ မြင်ချင်မိကြောင်းပါဗျာ…
Pazflor ပြောတဲ့အထဲမှာ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့စကားလေးရှိပါတယ်…
အဲဒါကတော့ ဒီမိုကရေစီကို တလွဲသဘောပေါက်ပြီး ရခိုင်သားတွေကြောက်သွားမှာဆိုတာပါ…
ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ဖယ်ဒရယ်မူကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ တလွဲသဘောပေါက်ပြီး ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကနေသွေဖယ်သွားခဲ့သလို…
အခုလဲ ဒီမိုကရေစီကိုတလွဲသဘောပေါက်သွားအောင် လုပ်နေတယ်လို့မြင်ပါတယ်…
နောက်တစ်ခုက အစိုးရအနေနဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေဆိုတာကြီးကို အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားမယ့်အစား…
မဟုတ်ရင်တော့ အဖတ်ဆယ်ဖို့ အတော်ခက်နေကြောင်းပါဗျာ…
ဒါပေမယ့် သာမာန်လူထုကလဲ ဘာကြောင့်ဒီမိုကရေစီလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး…
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဘာလဲ… လူ့အခွင့်ရေးဆိုတာ ဘာလဲ သေချာမသိပါဘူး… မခံစားတတ်သေးပါဘူး…
သူတို့နားလည်တာက ဒီမိုကရေစီရရင် သူတို့မိသားစုချောင်လည်လာမယ်… လျှပ်စစ်မီးမှန်လာမယ်…
ရေမှန်လာမယ်… လစာကောင်းလာမယ်လို့ ထင်ထားကြတာပါ…
တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အဲဒါမဟုတ်ပါဘူး…
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုလိုချင်နေတာ ဒီမိုကရေစီထဲက ကိုယ်သာမယ့်အရာတွေပါ…
ဒီမိုကရေစီထဲက ကိုယ်နာမယ့်အရာတွေကို မလိုချင်ကြပါဘူး…
(၅)နှစ်တာ ရခိုင်ပြည်မှာဆိုပြီးတော့ အခန်းဆက်လေးရေးပါဦးလား….
ကျုပ်က ဘေးထိုင်ကြည့်တဲ့လူအမြင်ကို NGO တွေရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့တွဲရေးတာပါနော်…
ခင်ဗျားကတော့ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကပြခဲ့သော (၅)နှစ်တာအတွေ့အကြုံလေးတွေ မျှဝေပါဦးလို့…
အဲဒါဘာလဲလို့ပြောရရင် ယဉ်ကျေးမှုမရှိတာလို့ပဲ ခပ်ရိုင်းရိုင်းခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ချင်သဗျ…
အနောက်တံခါးကို ကာကွယ်တာ ကိုယ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးဗျ…
အိုက်ဒါ အစိုးရလုပ်ရမယ့်အလုပ်… ဒါ့ကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့လိုတယ်လို့ပြောနေတာ…
တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်ရင်… ကိုယ်လုပ်ရမှာက ရင်ထဲကတံတိုင်းမပြိုဖို့ပါပဲ…
စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီး တိုင်းပြည်နဲ့ ကိုယ့်ဒေသကို ကောင်းကျိုးဖြစ်စေလား…
ဆိုးကျိုးဖြစ်စေလားဆိုတဲ့ လူယဉ်ကျေးတို့ရဲ့ ရင်ထဲကတံတိုင်းကို မပြိုဖို့ပါပဲ…
တံတိုင်းပြိုပြီးမှ တံခါးသွားစောင့်နေလို့ အဖြေကမထူးခြားပါဘူး…
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ…. လူမှတ်မိလွယ်ပြီး ပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့ ဥပဓိပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတော့… သွားသတိ..လာသတိ..စားသတိတော့ မလွတ်စေနဲ့ပေါ့.. ဘရာသာရ်ရယ်.. ဆေ့ဖ်ထရစ်ပ်.. :))
အော်ဂလိုလား.. အေးဗျာထင်တော့ထင်သား.. ဘယ် အန်ဂျီအိုကမှ အဲလို သများကိစ္စ မစွက်ဖက်ဘူးဆိုတာ..
ဘယ်နှယ့်ကြောင့်များ ကိုယ့်ကိုလာကူညီတဲ့သူတွေကို လုပ်ကြပါလိမ့်…
အဲလိုစလုပ်တဲ့သူနဲ.များတွေ.ရင် ကိုဖက်ရေ ဘာလို.ဒီလိုလုပ်သလဲ မေးကြည့်ခဲ့စမ်းဘာဗျာ…
ကျုပ်တို.တိုင်းရင်းသားတွေနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးလဲ.. ခင်ဗျားပြောသလို ဖြစ်လာပါစေလို. ထပ်တူဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာ….
ရခိုင်က ဆီးဖု တွေမှတ်လို့ ပြေးလာတာ။
ကျွန်တော့ကို အသွားအလာအနေအထိုင်သတိပေးကြသော… မမခရစ်(စ)၊ အစ်ကိုကြီးရွှေတိုက်စိုး နဲ့ မကြီးဆွိတို့အား အထူးတလည်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျား…
NGO က လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကော ၊ ရခိုင်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကော ၊ ရခိုင်လူမျိူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကော ကိုကြောင်ဝတုတ်ရဲ့ အမြင်ကတော့ ဒေသခံတွေနဲ့ကွဲနေမှာပါ ။ စကားမစခင် ကျမက ရခိုင်ပါ… လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁ဝ (ကျမအသက် ၂၂ နှစ်အထိ) ရခိုင်မှာနေခဲ့တဲ့သူပါ ။ ဒီတော့ ကျမအပြောအမြင်တွေက ရခိုင်တွေကိုကိုယ်စားပြုမှာသေချာပါတယ် ။ ရခိုင်တွေကိုသည်းတယ်ပဲပြောပြော.. ။ sensitive ဖြစ်တယ်ပြောပြော ကြိုက်သလိုပြောနိုင်ပါတယ် ။ NGO ဆိုတာ ရခိုင်လူထုတွေအတွက်မဟုတ်ဘူး ဒေသခံရခိုင်တွေအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကိုကြောင်ဝတုတ်ငြင်းချင်ပါသလား ၊ NGO လာလို့ ကျမတို့ဒေသအတွက်ဘာမှအကျိူးအမြတ်မရှိပါဘူး ။ NGO က ရခိုင်မှာနေတယ် ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်း NGO တွေလုပ်ပေးနေတာ ဗူးသီးတောင် မောင်တော ကုလားတွေဇုန်အတွက်ပဲ ၊ မဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်တဲ့ နေရာတွေ ၊ သောက်ရေရှားတဲ့ နေရာတွေ တပုံတခေါင်းကျန်ပေမယ့် ကုလားမရှိတဲ့နေရာအတွက် ပရောဂျတ်မရှိဘူးဆိုတာ ကိုကြောင်ဝတုတ်သိပါသလား ။ ရသေ့တောင်ဆိုတဲ့ မြို့ရဲ့ ကျေးရွာသေးသေးလေးတွေမှာ မွဲပြာကျအောင်ဆင်းရဲကြတဲ့ရခိုင်ရွာတွေ တပုံတခေါင်းရှိပေမယ့် ရခိုင်ရွာကိုကျော်ပြီး ကုလားရွာတွေကိုပဲ ဦးတည်သွားတာ ကျမ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တွေ့ဖူးပါတယ် (မာတီဇာ ဆိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပဲ) ။ ကျမကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလိုက်ဖူးလို့ မဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းလို့တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော် ။ အိမ်တစ်ဆောင်မီးတပြောင်ငှားပြီး budget လိမ်တင် ၊ ခရီးတစ်ခုသွားရင် ကိုယ့်အတွက်ကျန်မှ ဆိုတဲ့ ရခိုင်မဟုတ်တဲ့ အန်တီကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ စကားသံကို ကျမခုထိကြားတုန်းပါပဲ ။ အဖြူက ငွေချပေးတာနည်းလို့ ပြသနာလုပ်တဲ့ ဆရာဝန်မတစ်ယောက်လည်းပါပါသေးတယ် ။ သူတို့တွေဟာရခိုင်တွေမဟုတ်သလို ၊ ရခိုင်တွေအတွက်လည်းဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူး ။ အရင်တုန်းက အန်ဂျီအိုလာရင် အလုပ်အကိုင်ရတယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်တမ်းက ရခိုင်တွေကို လိုအပ်တဲ့နေရာက ခပ်နည်းနည်း ။ စကားပြန်နဲ့ တောက်တိုမယ်ရသာသာပဲ ။ စကားပြန်တောင်မှ ကျမတို့ရခိုင်တွေက ကုလားစကားမတတ်တော့ ကုလားရောရခိုင်လိုပါတတ်တဲ့ ကုလားပညာတတ်သူတွေကိုပဲခန့်ကြတယ် ။ ဒါကတော့ သူတို့ကိစ္စပါ..။ ငြင်းစရာအကြောင်းမရှိသလို အန်ဂျီအိုမရှိလို့ ကျမတို့ထမင်းလည်းမငတ်ဘူး ။ အန်ဂျီအိုကိုမှီပြီး ရပ်တည်နေကြတဲ့သူတွေထဲမှာ ရခိုင်တွေပါပေမယ့် ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ပဲရှိမှာပါ ။ တစ်ရာမှာ နှစ်ရာခိုင်နှုန်း သုံးရာခိုင်းနှုန်းလောက်ပေါ့ ။ပြီးတော့ အန်ဂျီအိုထဲဝင်လုပ်တဲ့ရခိုင်တွေက အင်္ဂလိပ်လိုတတ်တဲ့သူတွေများတာမို့ သူတို့အတွက် အလုပ်မရှားဘူးရှင့် ။ ဒါကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး ။ ကျမတို့လူထုရဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကို ကိုယ်စားမပြုတဲ့အတွက် ရခိုင်လူထုအတွက် ထိခိုက်နစ်နာစရာမရှိပါဘူး ။
ကျမတို့လူထုရဲ့ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေးကို တာဝန်ယူတာမဟုတ်တဲ့အတွက်လည်း ကျမတို့အတွက်ဘာမှမနစ်နာဘူး ။ အန်ဂျီအိုဆေးခန်းမှာ ရခိုင်တွေကိုလက်မခံတဲ့အကြောင်း ကိုကြောင်ဝတုတ်သိပါသလား ။ ရခိုင်လာရင် ကုလား ဒရဝမ်ကတောင် နှင်ထုတ်ပါတယ်..။ ဒီတော့ ပညာရေး ကျန်းမာရေး အတွက် ရခိုင်လူမျိူးအတွက် ဘာမှမလုပ်ပေးတဲ့အတွက် ကျမတို့အတွက်မလိုအပ်ပါဘူး ။ အေကိုက်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ မပူပါနဲ့ရှင့် ဆေးရုံမှာ ဆေးအလကားတောင်းလို့ရပါတယ်..။ သားဆက်ခြားအတွက်မပူပါနဲ့ ။ မြတ်စွာဘုရားက သားဆက်ခြားခြင်းကိုအပြစ်လို့မသတ်မှတ်တဲ့အတွက် ရခိုင်တွေအတွက်ပူစရာမရှိပါဘူး ။ အော်…အိမ်ငှားခတွေဈေးကြီးတာလား..အန်ဂျီအိုတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။ အန်ဂျီအိုတွေကို အိမ်ငှားနိုင်တဲ့လူတန်းစားတွေကလည်း ရခိုင်တွေရဲ့ ရေပေါ်ဆီလူတန်းစားတွေပါ..။ သူတို့အိမ်မငှားရလို့ လူထုကိုမငြိုငြင်ပါဘူးရှင့်..။ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ စိတ်ဟာ အမျိူးသားရေးနဲ့ပက်သက်လာရင် ရခိုင်တွေမှာမရှိပါဘူး ။ သူတို့အိမ်ကို အန်ဂျီအိုကိုမငှားရလို့ ဝင်ငွေမရှိဘူးဆိုရင်တောင် လူထုရဲ့ တစ်ရာခိုင်နှုန်း ၊ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းသာမို့ ကျမတို့ လျစ်လျူရှုလို့ရပါတယ် ။
အဓိက ပြသနာက ကိုကြောင်ဝတုတ်တို့အဖွဲ့အစည်းကတော့ ဘာတွေလုပ်တာလဲမသိဘူး ။ ကျမတို့သိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ မောင်တောမှာ ပြသနာတက်တုန်းက လက်နက်တွေဖွက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်..။ ကိုယ့်မြေကိုလာပြီး ကိုယ့်မြေကို ကောင်းကျိူးမပေးတဲ့အပြင် ကိုယ့်မြေကို လိုချင်ပြီး ကိုယ့်လူတွေကိုသတ်မယ့် လူတွေအတွက် လက်နက်ကိုဖွက်ပေးတယ် ၊ သိမ်းပေးတယ် ၊ သယ်လာပေးတယ်…ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေကိုတော့ ကျမတို့လူထုက ခွင့်မလွှတ်ပါဘူးရှင့်..။ ကိုကြောင်ဝတုတ်ပြောတဲ့ကိစ္စက အန်ဂျီအိုဖက်ကအမြင်ဆိုရင် ကျမရေးတဲ့ ကော့မက်က အများစုသောရခိုင်တွေရဲ့ အန်ဂျီအိုအပေါ်မှာ မြင်တဲ့အမြင်ပါ ။
ခံရတာများရင် ခွေးပိန်တောင်ပြန်ကိုက်တတ်ပါတယ်..။ ကျမတို့တွေရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ကျမတို့ပဲသိပါတယ်..။ အန်ဂျီအိုမှာမနေဘဲနဲ့ သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဗူးသီးတောင် ၊ မောင်တောမှာ တစ်လလောက်ပဲ အဲဒီလူတွေနဲ့ဆက်ဆံကြည့်ပါရှင့်…။ ကျမတို့ရခိုင်တွေမနှစ်သက်တဲ့သူတို့တွေဟာ ဘယ်လိုလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိမှာပါ ။ အစိုးရ မစည်းကြပ်လို့ဖြစ်တဲ့ ပြသနာ၊ အရာရှိတွေ လာဘ်စားလို့ဖြစ်တဲ့ ပြသနာ ဆိုပေမယ့် ခံရတာက ကျမတို့တွေပါ..။ ကလေးတွေမှာတောင်မှ ဆရာမမျက်နှာသာပေးလို့ ကြွနေတဲ့ ကလေးကို မခံနိုင်လို့ခဲတံနဲ့ထိုးတဲ့ ပြသနာတွေရှိကြတာ သိမှာပါ..။ ကျမတို့လူထုက သည်းခံခြင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်စင်တွေမဟုတ်ဘူး ၊ ကိုယ့်မြေမှာလာပြီး ကိုယ်တွေကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေ ကိုယ့်ဆွေမျိူးသားချင်းတွေကိုအိမ်မဲ့ယာမဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေ ။ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာက အပျိူအရွယ် မိန်းမသားတွေအတွက် လုံခြုံရေးကိုစိုးရိမ်ရအောင်လုပ်တဲ့သူတွေ၊ နေညိုရင် ယောက်ျားမိန်းမမရွေး ကုလားရွာဘက်ကိုမသွားရဲတဲ့ဘဝတွေ (ယောက်ျားဆိုရင် ပစ္စည်းလုမယ် ရိုက်မယ် သတ်မယ်…မိန်းမဆိုရင် မုဒိန်းကျင့်မယ် သတ်မယ်…) အဲဒီဘဝတွေမှာ မနေရသရွေ့တော့ ရခိုင်တွေကို အိုဘားမားလည်းကိုယ်ချင်းစာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင့်..။ လူဆိုတာက ကိုယ့်ထမှ နာတဲ့အမျိူးတွေလေ….
ဟေ့ မင်းရခိုင်မတစ်ယောက်ကိုရအောင်ယူရင် နှစ်သိန်းရမယ်…။ ကျောင်းဆရာမဆိုရင်လေးသိန်း ၊ ဘွဲ့ရရင် သုံးသိန်း ဆိုပြီး သတ်မှတ်ခံနေရတဲ့ကြားက သွေးမနှောအောင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်နေကြပြီး အစိုးရမပိတ်တဲ့အနောက်တံခါးကို မျိူးချစ်စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပိတ်ထားတဲ့လူတွေကို မချီးမြှောက်ချင်ရင်နေပါ…စော်တော့မစော်ကားပါနဲ့ရှင့်..။
အစ်မအမြင် အစ်မရဲ့ကော်မန့်က ရခိုင်လူမျိုးတွေအပေါ်မှာ ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတော့…
ဂဇက်မြို့နေလူထုများ ရခိုင်လူမျိုးများရဲ့အမြင်ကို တွေ့မြင်ရတာမို့ ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ…
NGO ဆိုတာ ရခိုင်ဒေသခံရခိုင်တစ်မျိုးတည်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး…
NGO ဆိုတာ အစိုးရခွင့်ပြုချက်ရတဲ့နေရာမှာပဲ အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်…
ခရီးသွားခွင့်တောင် အစိုးရခွင့်ပြုတဲ့ TA ရပြီးမှ သွားလို့ရပါတယ်…
ဒါဆိုရင် NGO ဟာ ဒေသခံရိုင်လူမျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ ခံစားမယ့်အစား အစိုးရက ဒေသခံခရိုင်လူမျိုးများအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ ဘာလို့များမခံစားကြပါလိမ့်လို့ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်…
ဒါဆိုရင် ဘာလို့များ အစိုးရရုံးတွေကို အကြမ်းမဖက်တာလဲဆိုတာလဲ စဉ်းစားစရာရှိသဗျ…
NGO ဆိုတာလဲ လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသမို့…
စည်းကမ်းကို လက်တလုံးကြားလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာသူတွေ NGO တို့ UN တို့လောကထဲမှာရှိပါတယ်…
အဲဒီလိုပဲ နယ်ခံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အတ္တဟာလဲ NGO နဲ့ လူထုရဲ့ဆက်ဆံရေးကို ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်…
အဲဒီတော့ဗျာ… NGO တွေမှာ ဘာလို့များ ရခိုင်လူမျိုးတွေနေရာရရှိပြီးတော့…ရခိုင်လူမျိုးများကောင်းစားဖို့… ထဲထဲဝင်ဝင်မလုပ်ဖြစ်ကြတာလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမိသဗျ…
NGO ဆိုတာ ဝန်ထမ်းခန့်တဲ့နေရာမှာ အလုပ်ဖြစ်ရေးအတွက် လိုချင်တဲ့အရည်အချင်းရှိသူတွေကိုခန့်မှာပဲ…
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ နယ်ဝန်ထမ်းခန့်တဲ့အလုပ်တွေမှာ ပါဝင်ဖူးပါတယ်…
ကျွန်တော်တို့တတွေ ကြည့်ကြတာ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာနဲ့ လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး…
ကျွန်တော်က ရခိုင်ဒေသတင်မဟုတ်ဘူး… ကျန်တဲ့မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက Base တွေအားလုံးကို
ရှမ်းပြည်နယ်စပ်တွေလိုနေရာမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ရှမ်းတွေက NGO ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လာပြီး…
ကျွန်တောတို့နဲ့လက်တွဲလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်… နယ်စပ်က ထိုင်းလူမျိုးတွေချည်းဝန်ထမ်းဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူးနော်…
ဒါပေမယ့် ရခိုင်ဒေသမှာ လက်တွဲလုပ်ခဲ့ရတာ ရခိုင်လူမျိုးနဲပါတယ်…
ရာထူးကြီးကြီးထဲမှာလဲ ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်… ဒါပေမယ့် လူနည်းစုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ
NGO ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းလဲသွားတာရှိနိုင်ပါတယ်…
လက်နက်တွေသိမ်းပေးထားတာ NGO ပေါ်လစီဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်သလို…
NGO ဝန်ထမ်းအားလုံးဟာလဲ Humanitarian အလုပ်တွေကို စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ လုပ်နေသူတွေမဟုတ်ပါဘူး…
NGO တွေမှာ လစာကောင်းလို့လုပ်နေတာများပါတယ်… ဒါက မြန်မာနိုင်ငံအနေအထားအရပါ…
အဲဒီတော့ နယ်ခံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အပေါ်အများကြီးမူတည်တဲ့အနေအထားမို့ အပြစ်တင်မယ့်တင်ရင်…
NGO မှာလုပ်နေပြီး လူသားချင်းစာနာထောက်ထားစိတ်မရှိသူတွေကိုပဲ အပြစ်တင်လို့ရမှာပါ…
NGO အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကို အပြစ်တင်လို့မရပါဘူး…
နောက်တစ်ခုပြောရရင်ဖြင့် အစိုးရမပိတ်တဲ့အနောက်တံခါးကို မျိုးချစ်စိတ်တစ်ခုထည်းနဲ့
တံခါးလုံအောင်မပိတ်တဲ့ အစိုးရကိုပဲ တံခါးပိတ်အောင်ဖိအားပေးသင့်ပါတယ်…
ရခိုင်လူထုရွေးထားတဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရကြီးကိုပဲ အပြစ်အရင်ဆုံးဖို့ကြည့်ကြပါဦးလားဗျာ…
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်တဲ့ ဒေသခံတွေမြင်တဲ့အမြင်လုံးလုံးလျားလျားကွဲပြားပါသတဲ့…
ဒေသခံတွေက ဘင်္ဂါလီကြောင့်လို့မြင်ပေမယ့်… ကျွန်တော်ကတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိလို့လို့မြင်ပါတယ်…
ဒီမှာတင် ကျွန်တော်တို့ပြင်ရမှာ ဘင်္ဂါလီမဟုတ်ဘဲ… ဥပဒေပြုတဲ့အစိုးရကို ပြင်ရမှာပါ…
ကျွန်တော်ကတော့ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာထက်… မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကောင်းကျိုးအတွက်အားထုတ်သူတွေကို
ဒါပေမယ့် မျိုးချစ်စိတ်တို့ ဘာသာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး အကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရပ်… လုပ်သူတွေကိုတော့ ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်… ဘယ်နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်မလေးစားပါဘူး…
ဘာခေါင်းစဉ်တပ်တပ်… အကြမ်းဖက်သမားဟာ အကြမ်းဖက်သမားပါပဲ…
ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို အကြမ်းဖက်သမားမဖြစ်စေချင်ဘူး… ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဒေသအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ဒေသတွင်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတစ်နေရာမဖြစ်စေချင်ဘူး…
ဒါဟာ ကျွန်တော့်ခံယူချက်… ကျွန်တော့အယူအဆပါခင်ဗျာ…
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ လူမျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတာမဟုတ်ပါဘူး… နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ…
အဲဒီလိုပဲ ပြည်နယ်တစ်ခုဟာလဲ လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ပါဘူး…
ပြည်နယ်တွင်းတရားဝင်နေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှမမေ့စေချင်ပါဘူး…
အစိုးရကဖိအားပေးလို့ရတာကိုး ကိုကြောင်ဝတုတ်ကလည်း နောက်တယ်.. ။ ကျမပြောချင်တာက ကျမတို့လည်းအကြမ်းဖက်မှုကိုမလိုလားတဲ့သူတွေပါ..။ ပြီးတော့ အကုန်လုံးဗုဒဘာသာတွေပါ ။
—-NGO ဆိုတာ ရခိုင်ဒေသခံရခိုင်တစ်မျိုးတည်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး…
ဒါဆိုရင် NGO ဟာ ဒေသခံရိုင်လူမျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ ခံစားမယ့်အစား အစိုးရက ဒေသခံခရိုင်လူမျိုးများအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ ဘာလို့များမခံစားကြပါလိမ့်လို့
အဲဒါလေးကနေ စပြေပါ့မယ် ။ အစိုးရခွင့်ပြုတဲ့နေရာကိုအလုပ်လုပ်ရတယ် ခွင့်ပြုချက်ယူရတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ် လက်ခံပါတယ် သိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် စဉ်းစားကြည့်ပါ အစိုးရကို ကုလားတွေရှိတဲ့ဒေသကိုပဲ သွားလုပ်မယ့်လို့ ခွင့်ပြုချက်တင်တာကိုရော ကိုကြောင်ဝတုတ်သိပါသလား ။ ကျမတို့ဒေသခံတွေအတွက် လုပ်ပေးဖို့အစီစဉ်မရှိဘဲနဲ့ ခွင့်ပြုချက်တင်ကတည်းက ဗူးသီးတောင် မောင်တောဆိုရင် တခြား ပုဏားကျွန်း ၊ ကျောက်တော် ၊ မြောက်ဦးတွေ ဘာမှအကျိူးခံစားခွင့်မရှိတာမဆန်းပါဘူးနော်…။ အစိုးရခွင့်မပြုတဲ့နေရာကို ခိုးသွားပါတယ်..။ အစိုးရပေးမယ့် စာရင်းထဲမှာမပါတဲ့ ရခိုင်တွေကို ခိုးမပေးပါဘူးရှင့် ။ မျက်စိစုံမှိတ်ပြီးငြင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော် ။ ကိုယ်တိုင်သိနေလို့ပါ ။
— NGO ဆိုတာလဲ လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသမို့…
ဘာသာလူမျိူးမခွဲဘူးပြောပေမယ့် တကယ့်လိုအပ်တဲ့နေရမှာ ဒေသခံကိုရွေးခန့်သလားမရွေးသလား ရခိုင်က လူတွေကိုမေးကြည့်ပါ ။ လစာကောင်းကောင်းရပြီးအိမ်ကိုကားလာကြိုတဲ့ အလုပ်မျိူးကို သူသူကိုယ်ကိုယ်လုပ်ချင်ကြတာချည်းပါပဲ ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျမတို့ဒေသခံတွေကိုမရွေးချယ်တာမို့ ရခိုင်တွေရှိမနေတာပါ ။ လျှောက်ပေမယ့် ရခိုင်ဆိုရင် မရတာချည်းပါပဲ ။ ကံထူးတဲ့ လူနည်းစု လူတော်တွေတော့ရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် သာမန်အလုပ်တွေအတွက်တော့ ရခိုင်ဆိုရင် ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမရှိသလောက်ပါပဲ ။
လူအမျိူးမျိူးစိတ်အထွေထွေမို့လူကိုအပြစ်မတင်ပါဘူး မူကိုပဲတင်ပါတယ် ။ မူကိုက လူနည်းစုလို့ အော်ငိုပြနေတဲ့လူများစု ၊ လူ့ခါချဉ်အုံလိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်နေကြတဲ့ လူတွေအတွက်ပဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့မူမို့လို့ ကျမတို့တွေအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမမှားပါဘူးနော် ။
—နောက်တစ်ခုပြောရရင်ဖြင့် အစိုးရမပိတ်တဲ့အနောက်တံခါးကို မျိုးချစ်စိတ်တစ်ခုထည်းနဲ့
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို မနောက်ပါနဲ့ ကိုကြောင်ဝတုတ်ရယ်…။ တစ်နိုင်ငံလုံးခွေးဖြစ်နေတာတောင်မှ စာအုပ်မပျက်တဲ့အစိုးရအကြောင်းကိုမသိတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့။ ရခိုင်တွေကို လျစ်လျူရှုတယ်ဆိုပြီး မငိုပြတော့ဘူး။ ဘဝမှာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီးလာခဲ့ကြတာမို့…… ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ်ပဲရှင်းနေကြတာ ရခိုင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး ။ တခြားလူမျိူးတွေလည်းရှိပါသေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် လူနဲ့လူ ပြသနာဖြစ်တဲ့ကိစ္စမို့လို့ ၊ ယိုးမယ်ဖွဲ့ငိုချင်းချနေတဲ့သူတွေမဟုတ်လို့ နာမည်ဆိုးမထွက်တာပါရှင့် ။ ရခိုင်ပြည်မှာ မီတာ တစ်ယူနစ်ကို ငါးရာ ၊ တစ်နေ့နှစ်ရာနီပဲ အစိုးရမီးလာတယ်ဆိုတာ သိမှာပါနော် ။ ပဲခူးရိုးမ အထိ ဖြောင့်ဖြူးနေတဲ့ ကတ္တရာလမ်းဟာ ပဲခူးရိုးမအဆုံး ၊ ရခိုင်ရိုးမကိုအဝင်မှာ ဘယ်လောက်ထိဆိုးသွားလဲ…. အစိုးရဘယ်လောက်ပစ်ပယ်ထားလဲဆိုတာ ရခိုင်ကိုကားလမ်းကသွားဖူးသူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒီတော့ အဲလို တစ်တိုင်းပြည်လုံးကိုတောင်ရောင်းစားပစ်ချင်တဲ့အစိုးရကို ဖိအားပေးရမယ်..ကိုကြောင်ဝတုတ်ပြောသလို ဖိအားပေးလို့ရသွားမယ်ဆိုရင် အကြံပေးတဲ့ ကိုကြောင်ဝတုတ်ကို ကျမ ကျေးဇူးရှင်စာရင်းသွင်းလိုက်မှာပါ ။
—ဒါပေမယ့် ရခိုင်ဒေသမှာ လက်တွဲလုပ်ခဲ့ရတာ ရခိုင်လူမျိုးနဲပါတယ်…
အဖြေက ကျမတို့လူမျိူးတွေကိုကောင်းကျိူးမပေးတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အပြင် ၊ ကျမတို့လူမျိူးအတွက် အခွင့်အလမ်းရအောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်လို့ ကျမတို့ဒေသခံတွေရှိမနေတာပါ ။
တရားဥပဒေမစိုးမိုးတာ ရခိုင်တစ်ပြည်နယ်တည်းမဟုတ်ဘူး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးပါပဲရှင့် ။ အစိုးရကို အပြစ်တင်ပေမယ့် အခုထိ နာမည်ခံအစိုးရ အခုထိ အစိုးမရဘဲလုပ်ချင်တာလုပ်နေတဲ့သူကို ကျမတို့မကြိုက်ပေမယ့် ကျမတို့မတွန်းလှန်နိုင်ပါဘူးရှင့် ။ တွန်းလှန်လို့ ဘဝပျက်နေကြရတဲ့သူတွေလည်းတပုံတခေါင်းကြီးပါ ။ ကျမတို့က ငိုပြရမှာကိုရှက်တတ်ကြတဲ့လူမျိူးတွေလေ။ ငါ့သားလေး နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ ထောင် အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျတယ် ၊ အစိုးရမကောင်းဘူး…ဆိုပြီး ကမာ္ဘပတ်ပြီး မျက်ရည်ချူ တာထက် မျိူးချစ်စိတ်ကိုရင်ထဲမှာထားပြီး ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်နေကြတဲ့သူတွေပါ။
–န်တော်ကတော့ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာထက်… မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကောင်းကျိုးအတွက်အားထုတ်သူတွေကို
တချို့ မြန်မာတွေနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးမကွဲကြတာကို ကျမနားလည်သလို လက်လည်းခံပါတယ် ။
အန်ဂျီအိုရုံးကို သာသနာ့အလံအကြောင်းပြုပြီး ပြသနာလုပ်တာကို ကျမလက်လည်းမခံပါဘူး ။ ကန့်ကွက်ပါတယ် ။ မှားတယ်လို့လည်း ထောက်ပြခဲ့ပါတယ် ။
ဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ် crime is crime ပါ ။ အင်္ဂလိပ်မ မဖွယ်မရာလုပ်တယ်ဆိုတာကို ဒီလိုမျိူး အိုင်တီခေတ်မှာ သက်သေလေးတောင်ရအောင်မလုပ်နိုင်ဘဲ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံသက်သေတောင်မရှိဘဲ ဒီလိုမျိူး ရမ်းကားတာကို လက်သင့်မခံပါဘူး ။ မလုပ်သင့်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်လူမျိူးဖြစ်နေတော့ အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားပြောမထွက်ဘူး ။ ကျမတို့တွေဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေမဟုတ်ပါဘူး ။ ဘုရားအဆုံးအမနဲ့ နေလာကြတဲ့သူတွေပါ ။ ကုလားဆိုတာကိုမနှစ်သက်ပေမယ့် လူသားချင်းစာနာစိတ်ရှိကြတာ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်အဲဒီမြေမှာနေခဲ့တဲ့ ကျမသိနေပါတယ်ရှင့် ။ ကျမတို့အိမ်က အဝတ်လျှော်တဲ့ ကုလားမ မင်္ဂလာဆောင်တော့တော့ ကိုယ့်သမီးလေးလို နှမြောနေတဲ့ ကျမအမေမျက်နှာကိုပြေးမြင်ပါတယ် ။ ကျမတို့ဘယ်တုန်းက မှ ခွဲခြားမဆက်ခံခဲ့ဘူး ။ ကုလားတွေကိုကျူရှင်လခ တပြားမှမယူဘဲ စာသင်ပေးတဲ့ ရခိုင်ဆရာ၊ ဆရာမတွေ အကြောင်းကို ကိုကြောင်ဝတုတ် မသိလို့နေမှာပါရှင့် ။ ပြသနာဖြစ်ရင် ကုလားမကိုအိမ်မှာညခေါ်သိပ်ပြီး စောင့်ရှောက်ပေးကြတဲ့ ရခိုင်မိသားစုတွေဒုနဲ့ဒေးပါ ။ ကုလားတွေက ဆန့်ကျင့်ဖက်ပါ..။ ရခိုင်ဆရာမ စာလာသင်ရင် ကုလားနဲ့ရခိုင်ပြသနာတက်ရင်..ဆရာမကိုလည်လှီးသတ်ပစ်ပါတယ်…။ ကျမတို့အသိတစ်ယောက်ပဲ…. အဲလိုအဖြစ်ဆိုးတွေကြုံးဖူးပါတယ်..ကိုကြောင်ဝတုတ် ။ ကျမတို့ဒေသခံတွေက ဆင်းရဲပါတယ် ။ နောက်မှာ ရွှေထုတ်ပိုက်ပြီး လိုက်ရှင်းပေးမယ့် ဗလီဆရာ မရှိတော့ ဖားအော်ရင် လူသိပါတယ့်ရှင့် ။ မြွေကိုက်တာကိုလူမသိပါဘူး ။
တရားဥပဒေမစိုးမို့လို့ဖြစ်ရတာကိုလက်ခံပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လူဆိုတာ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေကြရပါတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံအလံကို အလေးမပြုဘူး ။ ကျောင်းမှာ ဘုရားရှိခိုးကြရင် ငုတ်တုပ်ထိုင်နေတယ် ၊ ဥပုပ်စောင့်တယ် တံထွေးမမျိူးရဘူး ဆိုပြီး ထိုင်ခုံပတ်ပတ်လည်ကို တံထွေးပစ်ထားကြတာ ဒါဟာ လူသားဆန်တဲ့လုပ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူး ။ ခရစ်ယာန်တွေလည်းရှိပါတယ်နော် ။ သူတို့ဘုရားမရှိဘူး ဒါပေမယ့် မရမ်းကားပါဘူးရှင့် ။ အဓိကကတော့ဆိုဆုံးမခြင်းမရှိလို့ပါဘဲ ။ လူကြီးသူမတွေက အစ…ရခိုင်တွေက ငါတို့ မြေတွေကိုယူထားတာ..ရခိုင်မြင်ရင်သတ် ၊ ဘာသာရေးဆရာတွေက ရခိုင်ဟာ ရန်သူပဲလို့ အသိဉာဏ်တစ်ထွာတစ်မိုက်လေးသာရှိသေးတဲ့အရွယ်လေးကနေ brain wash လုပ်ထားတော့ အဲလို လူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ နေသားမကျတဲ့ လူကလေးတွေဖြစ်လာတာ မဆန်းပါဘူးရှင့် ။
ရခိုင်တွေအကြမ်းဖက်တယ်လို့ ကိုကြောင်ဝတုတ်ပြောပါတယ်နော် ။ နောက်တစ်ကြိမ် ရခိုင်တွေအကြမ်းဖက်ခံရရင်..ကုလားတွေအကြမ်းဖက်တယ် မသင့်တော်တာကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ကိုကြောင်ဝတုတ်ထပ်ရေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ။ စစ်တွေ ဘီလူးမတံတားရဲ့ တစ်ဘက်က ရွှေပြားရပ်ကွက် တစ်ကွက်လုံးပြာကျသွားအောင် အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ ကိစ္စမျိူးတွေအတွက် နှုတ်ဆိတ်နေကြတဲ့လူတွေကို ကျမ မမေ့သေးပါဘူးရှင့် ။ ရခိုင်မိသားစုဝင်တွေ ဒုက္ခသည်စခန်းကိုရောက်ပြီး စားစရာနေစရာမရှိလို့ ၊ ဆွေမျိူးတွေကိုစိုးရိမ်လို့ ကျမတို့လို မျက်ရည်ကျတဲ့ အဖြစ်တွေမရှိသရွေ့တော့ ကျမတို့ကို ကိုယ်ချင်းစာနိုင်ကြမယ်မထင်ပါဘူး ။ ကျမသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောတာကြားယောင်တုန်းပဲ ။ ငါတို့ ကုလားမီးရှို့လို့ ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးကြရတာ… ဒါငါတို့အစဉ်အဆက်နေလာတဲ့မြေ ငါတို့မြေမှာတောင် ခွေးလိုဝက်လိုပြေးရတဲယ်တဲ့…။
–လက်နက်တွေသိမ်းပေးထားတာ NGO ပေါ်လစီဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်သလို…
အဲဒီအန်ဂျီအဖွဲ့အစည်းက လူတွေမှာ လက်နက်တွေတွေ့လို့ အဖမ်းခံရတာ မသိ ဘူးထင်ပါတယ်နော် ။ မကြာသေးဘူး ရှင့် ။ ပြသနာတွေဖြစ်တုန်းက လက်နက်တွေတွေ့လို့ အဖမ်းခံရပါတယ်…။ အဲဒီ ဗူးသီးတောင် မောင်တောပြသနာမှာပဲ… ကိုယ်ကျိူးမကြည့်ဘဲ ဒဏ်ရာရတဲ့သူကို ကုပေးနေတဲ့ ဆရာဝန် မိသားစုကို အိမ်ဖော်ကုလားမ အဆိပ်ခတ်သတ်တာကိုရော သိပါသလားရှင့်..။ ဆေးကုပေးတဲ့ဆရာဝန်ကိုလည်း လူနာက ဓားထိုးသတ်လိုက်တာပါ ..။
ကျမလည်းတစ်ခုမမေ့စေချင်ပါဘူး မြန်မာပြည်မှာ ကာလရှည်ကြာစွာနေရင် မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ ကိုကြောင်ဝတုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်နော် ။ စင်ကာပူမှာ မြန်မာတစ်ယောက်ကာလရှည်ကြာစွာနေပြီး စီတီဇင်လက်မှတ်ရတစ်ယောက်ကို ငါစင်ကာပူနိုင်ငံသား ဒါပေမယ့် စင်ကာပူဇာတိ လို့ ပြောလို့မရပါဘူး ။ ဇာတိက မြန်မာ ဆိုပြီးတော့ပဲပြောရပါတယ် ။ စလုံးတွေလည်းလက်မခံပါဘူး ။ လူတိုင်းမှာ မျိူးရိုးဇာတိဆိုတာရှိပါတယ် ။ ကျမကိုလည်းဘယ်သူမေးမေး မြန်မာ ဒါပေမယ့် ရခိုင်က ရခိုင်လူမျိူး ဆိုပြီး ဖြေပါတယ် ။ ကျမရဲ့ မျိူးရိုးဇာတိက လိမ်လို့မရဘူးလေ ။ နယ်စပ်မှာ တရုတ်တွေအများကြီးပါ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမေးမေး… မြန်မာတရုတ်လို့ပဲဖြေပါတယ် … အော်..မြန်မာပြည်ပေါက်တရုတ်ဆိုပြီးလက်ခံသဘောပေါက်ကြပါတယ်..။ ထိုင်းနိုင်ငံသားမြန်မာတွေရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမေးမေး…ထိုင်းနိုင်ငံသား ဒါပေမယ့် ငါတို့က မြန်မာပြည်ကလာတာလို့ ပြောကြတာပါ ။ မြန်မာပြည်မှာ အရိုးဆွေးအောင်နေပေမယ့် မြန်မာဇာတိမဟုတ်တဲ့သူက မြန်မာမဟုတ်ပါဘူးရှင့် ။ ရခိုင်ဟာ ချင်းလို့လိမ်လို့မရသလိုပေါ့ ။
ဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ပက်သက်ရင် လူတွေက သည်းခံနိုင်စွမ်းနည်းပါတယ် ။ အဲလိုမျိူးသာ တခြားနေရာမှာဖြစ်ရင်လည်း ဆူဆူညံညံပေါက်ကွဲမှာပါပဲရှင့်..။ ကေတီပယ်ရီရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်မှာ မူဆလင်ဘာသာရဲ့ ပစ္စည်းအသုံးအဆောင်တစ်ခုကို ဝတ်ထားလို့ ဆူညံပူညံလုပ်တဲ့ အသံတွေကိုကြားမှာပါနော်..။ ဒါတောင် သာသနာ့အလံကို -င်ကြားညှပ်တယ်လို့ သတင်းထွက်တာမဟုတ်သေးဘူးရှင့် ။ အရမ်း sensitive ဖြစ်တဲ့ ဘာသာရေးကိစ္စတွေအတွက် ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ကျမကတော့ ရခိုင်တွေလုပ်ပုံကိုင်ပုံမှားတယ်လို့ယူဆသလို အဲဒီလို သတင်းထွက်ခံရအောင် ထိုနိုင်ငံခြားသူအမျိူးသမီး ဘာလုပ်ခဲ့လဲ ဆိုတဲ့ ကိစ္စလေးကိုသံသယဖြစ်မိပါတယ် ။ ဥပမာ ပုပ်လို့ပေါ်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောမျိူးပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် သက်သေပြစရာမရှိဘဲနဲ့ ကျမတို့စွပ်စွဲလို့မရပါဘူးရှင့် ။ ဖြေရှင်းပုံလုံးဝမှားပါတယ်..။
ဆက်ပြောရရင် ကိုကြောင်ဝတုတ်အပြစ်တင်ဖို့တစ်ခုကျန်နေခဲ့သလိုပါပဲ…။ အဲလိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာ ရခိုင်တွေကိုသေနတ်ပစ်တာလေ…။ ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ရေချိူးနေတဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက် ကျည်ထိပြီးသေသွားတဲ့ကိစ္စရော…အဲဒါ အိုဘယ့်ရခိုုင်ပြည်လို့ မညည်းသင့်ဘဲ အိုဘဲ အစိုးရလို့ ညည်းရမှာပါရှင့်…။ အကြောင်းအကျိူးဆက်တွေကြောင့် ရခိုင်ပြည်ကျိန်စာသင့်နေတာပါ ။ မိုးရာသီရောက်လို့ မုန်တိုင်းလာရင် ရေခံမြေခံကောင်းတဲ့ရခိုင်ပြည်ကို ကျော်ပြီး ဗထက်ချိုင့်ပုံဖြစ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလားကို မုန်တိုင်းအမြဲရွေ့ပါတယ်..။ မုန်တိုင်းတိုက်တော့ အကုန်ပျက်စီး ၊ ဆင်းရဲ… ဟိုဘက်က အိန္ဒိယက ကိုဖြတ်ရင် အသေပစ်သတ်မှာမို့…ဒီဘက်က မုဆိုးမအိမ် မြန်မာပြည် -ရခိုင်ကိုမျက်စောင်းထိုး ၊ ဆင်းရဲလို့ အဆိုးအကောင်းသိအောင် သင်ကြားပေးတဲ့ ပညာရေး ကိုသင်ကြားခွင့်မရ ။ ဘာသာတရားကိုတလွဲလုပ်ပြီး မူဆလင်မှ မူဆလင်ဆိုတဲ့ ဗလီဆရာတွေရဲ့ brain washed အလုပ်ခံရ ၊ ဒီကြားထဲ မုဆိုးမအစိုးရက ငွေမှငွေ..ငွေမပေးနိုင်တဲ့ရခိုင်ဟာ ဘာဖြစ်ဖြစ်ရှုံး ဆိုတော့ အသိဉာဏ်မပြည့်ဝတဲ့လူတွေရဲ့ ရမ်းကားသမျှကို ရင်စည်းခံရင်း နောက်ဆုံး ရခိုင်တွေရိုင်းတယ်ဆိုတာလေးပဲ…..ကျန်လိုက်ပါတော့ကြောင်း ။
ကျမရဲ့ စာမှာ ဒေါသသံပါရင်ခွင့်လွှင့်ပါရှင့်…။ ကိုကြောင်ဝတုတ်ကိုရော..စာဖတ်သူများကိုပါ… ဘယ်လိုသဘောထားကွဲလွဲ ကွဲလွဲ.. အငြိုးအတေးမရှိပါဘူးနော် ။
တစ်နေ့ နှစ်နာရီ မီးလာတာပါ *
အိုခေ… ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ မတူတဲ့အရာနှစ်ခုကနေ…
အဲ… ဒါပေမယ့် ဆွေးနွေးစရာ (၂)ခုရှိပါတယ်…
အစ်မမြတ်ဆုမိုးအနေနဲ့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးဖြစ်ပြီး… အစ္စလာန်ဘာသာကိုးကွယ်ရင်…
ဟိုးရှေးမဆွကတည်းက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေပြီးသား ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့…
မနေ့တစ်နေ့ကမှ ခိုးကူးဝင်ရောက်လာတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်က အစ္စလာန်ဘာသာဝင်တွေကို အတူတူပဲလို့ သတ်မှတ်ပါသလား…
အစိုးရဆိုတာကို အံတုလို့မရတဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူလုပ်သမျှ ငြိမ်ခံပြီး…
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး လမ်းဖောက်သလို… အနောက်ပိုင်းစည်းရိုးကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကာလို့
အစ်မခံစားချက်ကြောင့် ဒေါသသံပါသွားရင်လဲ ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါတယ်…
ကျွန်တော် စိတ်မဆိုးတတ်ဘူး… ကျွန်တော်ပျော်တတ်တယ်… နောက်တတ်တယ်…
အပြင်မှာခင်လို့လဲရတယ်… ကျွန်တော်တို့က ဂဇက်မြို့ထဲမှာ မျက်နှာပြထားတဲ့လူတွေ…
အဲ… ဓာတ်ပုံကြည့်ပြီး နောက်ကဓားနဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့လဲ ခံရမပေါ့ဗျာ… စတာနော်…
အဲ့ နိုင်ငံခြားသူက အမေရိကန်မ… (ပြသာနာ ဖြစ်ကာစက တူရကီမလို ့တောင် နာမည် ထွက်လိုက်သေး… တူရကီတွေက မွက်စ်တွေလေ…)
ရောက်တာက တလပဲရှိသေးတယ်….. သူ ့ခေါင်းထဲရှိတာက ရုံးသည် ဘာသာရေး နဲ ့ပတ်သက်တာ ကင်းရှင်းရမယ်….
ဒါဟာ NGO တိုင်းရဲ့ အခြေခံ ပဲ…. (တချို့သော ဘာသာရေး အထူးပြု NGO တွေလည်း ရှိပါတယ်… အဲ့ဒါတွေက ခြွင်းချက်ပါ….) (NGO ဆိုတာ Non Government Organization နော် Non Religious Organization မဟုတ်ဖူး….)
ဘာသာရေး ကင်းရှင်းရမယ်ဆိုတာ တဖွဲ ့ခြင်းစီရဲ့ ခံယူချက်….. အကုန်လုံးတော့ မတူဖူး….
မာလ်တီဇာက များသောအားဖြင့် နယ်မြေပေါ်လိုက်ပီး လူခန် ့တာ များတယ်…. စစ်တွေ မှာဆို အကုန်လုံးက ရခိုင်တွေပဲ ရုံးဝန်ထမ်းက…. ပြသာနာ မဖြစ်ခင်ကတည်း အဲ့အတိုင်းပဲ… တခြား အဖွဲ ့အစည်းနဲ ့ယှဉ်လိုက်ရင် သူတို ့က တကယ်ကို ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်အောင် နေရှာပါတယ်…. ကိုယ့်အချင်းချင်း မို့သူတို ့တွေ အကြောင်း အသိဆုံး…..
ဖြစ်တယ်ဆိုတာကြားတော့ ယုံတောင် မယုံချင်ဖူး…..
ဆိုလိုချင်တာကတော့ စဉ်းစား ကြပါလို ့…. ဖြစ်တိုင်းလည်း အဆုံး အဖြတ် မမြန်ပါနဲ ့လို ့… ကိုယ်လည်း အစိုးရကို နေရာတကာ မလှန်နိုင်တာလည်း သိပီးသား…. ကချင်လို အမာခံ စစ်တပ်လည်း မရှိ….. ကလေးသေတော့မှ သေပီပေါ့….. လက်ခုပ်ဆိုတာ နှစ်ဘက် တီးမှ မြည်တာပါ… အစိုးရနဲ ့ပဲတီးတီး…. NGO နဲ ့ပဲတီးတီး… ကိုယ့်ဘက်မှာလည်း တာဝန်ရှိပီးသား…. ကလေးသေတာ အစိုးရကြောင့် ပြောပြော… NGO ကြောင့်ပဲ ပြောပြော…. နယ်မြေခံလူထု တာဝန်လည်း မကင်းဖူး…. (ဒါတောင် စစ်ဖြစ်တာ မဟုတ်ဖူးနော်….)
အပေါ်မှာလည်း ကျွန်တော် တခါ ပြောပီးပါပီ….
အဲ့ဒါပဲ ဖွတယ်ဆိုတာ…. စစ်တွေမှာ မောင်တောမှာ ဘူးသီးတောင်မှာ…. အဲ့လို ဖွသတင်းတွေက အပတ်တိုင်းမှာ သုံးခုထက်မနဲရှိတယ်…..
နောက်ဆုံးတော့ သူ ့အမှားကနေ ကိုယ့်အမှားဖြစ်…. လူကောင်းကနေ လူဆိုးဖြစ်…. ဝတ်သား နဲ့ချဉ်ပေါင်…. တကယ်လဲဖို့မတန်တာပါဗျာ……..
ကျမနာမည် ဆုမြတ်မိုးပါရှင့်….။ မတူညီတဲ့အရာတွေကို ဘာလို့တူညီတယ်လို့သတ်မှတ်ရမှာလဲ..။ ကျမတို့ကို ပြသနာလုပ်တာက ဟိုးပဝေသနီတည်းကနေခဲ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး ။ ခုမှရောက်လာပြီးလူစွာလုပ်နေတဲ့သူတွေပဲလုပ်နေကြတာပါ..။ ရှိပြီးသား ဘင်္ဂလီတွေက ရခိုင်တွေနဲ့အတူတူနေလို့ရတယ်…ရခိုင်တွေ ၊ ဗမာတွေထက်တောင်အများကြီးယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေတွေ့ဖူးသေးတယ်..။ အသားမဲတိုင်း ဘင်္ဂလားပဲဆိုတဲ့ အမြင်မရှိပါဘူး ။ ခု ဗူးသီးတောင် မောင်တောဘက်မှာပြသနာလုပ်နေကြတာက ရခိုင်စကား မြန်မာစကားတစ်ခွန်းမှမတတ်တဲ့ ဘကုန်းတွေပါ ။ သူတို့တွေ စစ်တွေကိုအလွယ်တကူလာလို့မရဘူး ဗီဇာလိုတယ်လို့ပြောပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းတွေမှာ စစ်တွေဘက်မှာလည်း အဲဒီဘင်္ဂလားဘက်ကလူတွေတော်တော်များနေပါပြီ ။ ရခိုင်မှာ ကုလားရွာဆိုပြီးသီးသန့်နေကြပါတယ်..ကုလားတွေများတဲ့ဖက်မှာ ရခိုင်တွေမနေကြဘူး ။ ရခိုင်တွေနဲ့ရောပြီးနေတဲ့ ကုလားတွေက ဘိုးဘေးဘီဘင်လက်ထက်ကတည်းကနေလာတဲ့သူတွေ သူတို့တွေက ရိုင်းစိုင်းရမ်းကားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး ။ ကျမတို့တွေနဲ့လည်း ပြသနာမရှိဘူး။ ဒီဘက်ခေတ်မှာကူးလာတဲ့လူတွေသာ ပြသနာလုပ်နေကြတာပါ..။
ဟန်ထူးလွင်ရဲ့အသစ်ထွက်တဲ့ သည်းခံဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကိုနားထောင်ပြီးပြီလား ။ မထောင်ရသေးရင်နားထောင်လိုက်ပါဦး ။ ကျမပြောချင်တဲ့အရာတွေတော်တော်မာျးများ အဲထဲမှာပါပါတယ်..။
အနောက်ပိုင်းစည်းရိုးကို ကျမတို့တွေလက်ချင်းယှက်ပြီးကားထားတာမဟုတ်ဘူး ။ နှလုံးသားနဲ့ကာထားတာပါ..။ မျိူးရိုးထဲကို သွေးအရောမခံဘူးဆိုတဲ့ အမျိူးးကိုစောင့်ရှောက်သောစိတ်နဲ့ကာကွယ်ထားတာပါ ။ တကယ်လို့ရခိုင်သူတွေသာ ကုလားတွေကိုယူကြည့်…. ရာခိုင်နှုန်းနည်းနည်းလေးသာကျန်တော့တဲ့ ရခိုင်လူမျိူးဟာ ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအမျိူးပျောက်မှာပါ ။ ကျမတို့လူမျိူးတွေ သွေးအရောမခံလို့ ရခိုင်တွေခုထက်ထိ ဗုဒ်ဒ ဘာသာ (ပတ်ဆင့်ရိုက်မရလို့ပါ..) အနေနဲ့ကျန်နေသေးတာပါ ။ ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေ သွေးမရောလို့….သူတို့ ကျမတို့တွေကို ခြယ်လှယ်လို့မရဘူး ။ ကျမတို့နဲ့ ဆွေမျိူးသားချင်းတွေဖြစ်မလာတဲ့အတွက် နိုင်ငံသားဆိုတဲ့ အခွင့်ရေးတွေသူတို့မရဘူး ။ ဒါတောင်လွှတ်တော်အမတ်တွေတက်ဖြစ်နေကြသေးတာနော်…။ အနောက်တံခါးကို ဘိုးဘေးဘီဘင်တွေမျိူးရိုးစဉ်ဆက်သွန်သင်မှုတွေကြောင့်ကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုယ် ပိတ်နေကြတာပါ ။ အစိုးရ ပိတ်မှလုံမယ်ဆိုတာ….ကလေးကနေ ခွေးအထိ ဘယ်သူ့မေးမေးသိပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် အစိုးရမှမပိတ်တာ..။ အော်… အစိုးရတောင် ငါတို့ကို ဘာမှမလုပ်ပေးတာ..ငါတို့နေချင်သလိုနေမယ်ဟေ့ ဆိုတဲ့ စိတ်ဟာ အမျိူးသားရေးနဲ့ပက်သက်လာရင် ရခိုင်တွေမရှိပါဘူးရှင့် ။ လူတိုင်းချမ်းသာချင်ကြပေမယ့် ချမ်းသာတဲ့ကုလားကိုယူပြီးမှ ရမယ့် ပိုက်ဆံထက်…အောက်ခြေသိမ်းလုပ်တာက ပိုပြီးဂုဏ်ရှိတယ်လို့ ကျမတို့ရခိုင်တွေခံယူထားကြပါတယ်..။ ကျမတို့တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေလိုမျိူးကို မိန်းကလေးတိုင်းမွေးနိုင်ရင် ကန်တော်ကြီးမှာ မုတ်ဆိတ်မွှေးတကားကားနဲ့ အဘိုးကြီးကိုလက်ချိတ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးချောချောလေးတွေကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့သလို..ဆာရီအောက်က မြန်မာမျက်နှာလေးနဲ့ ဘာသာပြောင်းထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေကိုလည်းတွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး….။ ကျမတို့နိုင်ငံက ဘာသာတရားနဲ့ပက်သက်ရင်တော်တော်လွတ်လပ်ပါတယ်..။ ကျမတို့ဘာသာရေးက လူမသတ်ခိုင်းဘူး ၊ ဂျီဟတ်မလုပ်ခိုင်းဘူး ( အလာက လည်းဂျီဟတ်မလုပ်ခိုင်းဘူးလို့ ကျမထင်ပါတယ်…. ကိုရမ်ကျမ်းကိုမသိလို့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူး ဒါပေမယ့်…. အယူလွဲမှားတဲ့ ဘာသာရေးကိုကိုယ်ကျိူးအတွက်အသုံးချတာကြောင့် ခုလိုမျိူး ဂျီဟတ်တွေဖြစ်လာရတာပါ..ဘယ်ဘာသာတရားကမှ လူတွေကိုဆိုးသွမ်းပါစေဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တာမျိူးမရှိဘူးလို့ ကျမယုံကြည်ပါတယ်… ) ဒီလောက်လွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်မို့လို့ ထင်သလိုဘာသာပြောင်းပြီးလုပ်ချင်သလိုလုပ်နေကြတာပါ…။ တနေ့က သတင်းတစ်ခုထဲဖတ်လိုက်ရသေးတယ်…ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုပြောင်းလို့ ကိုယ်ဝန်ရှစ်လလွယ်ထားတဲ့ မူဆလင် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို သေဒဏ်ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့..ဒီလိုခေတ်ကြီးမှာနော်….။ ဘာသာရေးနဲ့ပက်သက်ရင် အဲလိုဓားထောက်ကန့်ကွက်ကြတဲ့အထိ strong ဖြစ်လွန်းကြတဲ့လူတွေက ကိုယ့်ဘာသာထဲကိုကျ အတင်းဝင်ခိုင်းတယ်…။ အင်းး ကြိုက်သလိုလုပ်ကြပါ..ဒါပေမယ့် ရခိုင်တွေမျိူးပျောက်လို့ နောက်ဆုံးတစ်ယောက်တည်းကျန်ခဲ့တဲ့အထိ အဲဒီစိတ်ကရှိနေမှာပါပဲ..။ ကိုယ့်သမိုင်းကိုကိုယ်ရေးကြတာပါ.. ကိုယ့်ဘာသာမှ ဘာသာစစ်စစ် ၊ ကိုယ့်ဘာသာဝင်မှ လူ ၊ ကိုယ်နဲ့မတူရင် ရန်သူ လို့သတ်မှတ်ပြီး ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးတဲ့သူတွေ ရာဇဝင်မှာနာမည်ဆိုးတွင်ကြမှာပါ..။ တရားဥပဒေစိုးမိုးလာတဲ့တစ်နေ့မှာ ရှဉ့်လည်းလျှောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာတဲ့ အခြေအနေတွေပိုင်ဆိုင်လာမှာပါ..။
ဒေါသဆိုတာလည်းထွက်အောင်လုပ်မှထွက်တာကိုး အကြောင်းမဲ့သက်သက်ဒေါသမကြီးတတ်သူမို့…… အကြောင်းမရှိဘဲ စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးရှင့် ။ ကျမကတော့ ခပ်တည်တည်နေတတ်တဲ့သူပါ..။ မျက်နှာမပြောင်ဘူး နောက်တာပါ..။ ကျမက ရွာထဲတော့မျက်နှာမပြထားပေမယ့် ဘယ်သူ့ကိုမှ နောက်ကျောဓါးနဲ့မထိုးတတ်ပါဘူး ။ ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုရေးရင် အသတ်ခံရမှာစိုးလို့ ဖွဘုတ်မှာဆိုရင် နိုင်ငံရေးအကြောင်း ဘာမှမရေးဘဲ..ခင်ဝင့်ဝါတို့ နန်းခင်ဇေယျာတို့ကိုပဲ ရသေ့စိတ်ဖြေအားပေးရင်း ဖားတွေနဲ့ပဲရန်ဖြစ်တဲ့သူပါ..။ ခုတောင်မေမြတ်နိုးက ဖိလစ်ပိုင်မှာ ထရိန်နင် ရက်ပေါင်းတစ်ဆယ်ကျော်ဆင်းထားတဲ့ မျက်နှာထောက်ပြီး အကဲပိုတဲ့ဖားတွေကို သည်းခံနေရတယ်…။ တော်ကြာ မြန်မာတွေ ကူညီတဲ့မျက်နှာတောင်မထောက်ဘူးလို့အပြောမခံနိုင်ဘူးလေ..။ ပြီးတော့ ကျမက အွန်လိုင်းကိစ္စတွေကို အပျော် သဘောပဲ ခံစားတတ်သူမို့ နိုးပလုံ ပလုံပါရှင့် …။
စကား အတင်းစပ် ကျနော်သည်လည်း
NGO လို့ အသံကြား ဘင်္ဂလီ နဲ့ တွဲမြင်ပါတယ် ကိုကြောင်ရေ
တခြားနေရာတွေမှာ problem မဖြစ်တာကတော့ ဘင်္ဂလီနဲ့ တိုက်ရိုက် မပါတ်သက်လို့
ရခိုင်ပြည်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ ရခိုင်သားတွေပဲ မှားနေသလား
ဒီပို့ကို တင်ပြီဆိုကတည်းက ကိုကြောင်ဝတုတ်သည်လည်း
သံတွဲသားတွေ အဖွဲ့ဂိုဏ်း အဝင်ပေါက် နားရောက်နေနှင့်ပြီနော်
ဘက်လိုက်တယ်ပြောပြော .. သံတွဲမှ အချို ့သောသူများ နဲ့ တော့ တူပါဘူးဗျာ..
ကြောင်ဝတုတ် နောက်မှာ စေတနာ ပါပြီး သံတွဲမှ အချို ုသောသူနောက်မှာ က ပြဿ နာ ဘဲ ပါတာ ဗျ ..
ဖက်ဖက်ကက်က ချစ်စရာကောင်းပါတယ် .. မယုံ သူ့ မိန်းမ မေးကြည့် ..
ကျွန်တော် သံတွဲသားတွေရဲ့ အိမ်တံခါးသွားခေါက်တာဗျ…
ဦးဂျစ်သိမယ်ထင်ပါတယ်… ဘာတဲ့… စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့လစ်ဘရယ်မို့…
ဘာသာရေး… လူမျိုးရေး မှိုင်းတွေနဲ့ မှုန်နေတဲ့ မြန်မာဒီမိုကရေစီလမ်းပြပြလေးကို ပျောက်သွားမှာစိုးသဗျ…
ဒီမိုကရေစီရရင် ဒီလိုမျိုးပြသနာတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်… တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာမယ်…
ဒီမိုကရေစီကို တစ်လွဲအထင်လွဲဖို့ ဖန်တီးနေကြသူတွေရှိနေတဲ့အချိန်…
ကျွန်တော်လဲ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်း ကိုယ်ကျင်လည်ရာနေရာတွေမှာ..
လူ့အခွင့်အရေးတို့ ဒီမိုကရေစီတို့အကြောင်း နားလည်သလောက်မဖြစ်ညစ်ကျယ်အသိလေးနဲ့
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေ… ဖယ်ဒရယ်မူတုန်းက တစ်ခါအလိမ်ခံရပြီးပြီ…
အခု ဒီမိုကရေစီမှာ ထပ်ပြီးအလိမ်မခံရလေအောင် အမုန်းများခံပြီးပြောမိပါတယ်…
ကိုထူးဆန်းကြီး ရှေ့နေလိုက်ပေးထားသလို… စေတနာပါလို့ပြောရင်လဲ ရသပေါ့…
ကျွန်တော့်မိန်းမသွားမေးစရာမလိုပါဘူး… ဂဇက်မြို့သစ်ကြီးထဲက လစ်ဘရယ်တွေထဲမှာ မေးကြည့်လဲသိပါ့ဗျာ…
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့အမြင်တစ်ခုပြောမယ်နော်… စိတ်မဆိုးကြကြေး…ဟီး
ရခိုင်ဒေသက အရင်ကတည်းက သူတို့ဒေသထဲမှာ ပြသနာရှိပြီးသား… အခုလိုထမဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်…
အခုအချိန်မှာတော့ ပေါက်ချင်တဲ့ဗုံးကို မီးရှို့မယ့်လူတွေ့သွားတော့ နိုင်ငံတကာအလယ်မှာ အရှက်ဖြန်းဖြန်းကွဲ
မိတ္တိလာတို့ လှည်းကူးတို့ အဖြစ်တွေကိုကြည့်ရင် ဒီလိုလူမျိုးရေး… ဘာသာရေးပြသနာဖန်တီးမှုတွေ…
ရှိနေတယ်ဆိုတာကို မြင်စေ့ချင်တယ်… အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြစ်တော့မယ့်အရေးကို ရင့်ကျက်စွာနဲ့ ရှောင်စေ့ချင်တယ်…
မဟုတ်ရင်လေ… မယုံမရှိပါနဲ့နော်… နောက်လှည့်ရုံတင်မကဘူး… မနည်းပြန်ကုန်းရုန်းတက်ထားရတဲ့
ချောက်ထဲကို နောက်တစ်ခါ ဇောက်ထိုးကျဦးမှာဗျား…
မဖြစ်ချင်တာတွေ လည်း ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပါပြီ
ဘယ်သူတွေက ဘယ်လို ဖန်တီးနေသလဲဆိုတာ
လူတိုင်းသိချင်ကြတဲ့ အဖြေ တခု ပါ
ရခိုင်မှာ ရခိုင့်သမိုင်းဆိုတာ တကယ် ရှိပါတယ်
တကယ်ကို ရှိနေခဲ့တာပါ …။
ရခိုင်မှာ ရခိုင့်သမိုင်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ တကယ်ဗျ…
ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အထဲမှာ မြောက်ဦး… ပုဂံနဲ့ အင်းလေးပါတယ်…
-ကျုပ် တသက် ရခိုင်လူမျိုးအများအပြားနဲ့ တွေ့ဖူး ခင်ဖူး မိတ်ဆွေဖြစ်ဖူး ရန်ဖြစ်ဖူး တယ်…။
-ထူ တဲ့ တုံး တဲ့ ညံ့ တဲ့ အတွေးအခေါ်နည်းပါးတဲ့ ဗဟုသုတနည်းပါးတဲ့ ပါးနပ်လိမ္မာမှု့မရှိတဲ့ အမြဲရန်လိုနေတဲ့ အမြဲမကောင်းမြင်နေတဲ့ -လူမျိုး လုံးဝ လုံးဝ မဟုတ်ဘူး။
-ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားတွေက မျိုးရိုးစဉ်ဆက်သင်ကြားပေးထားလို့-
-ပါးနပ်တယ်၊ လိမ္မာတယ်၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိတယ်၊ ဗဟုသုတရှိတယ်၊ လေ့လာသင်ယူမှု့ အားကောင်းတယ်၊ သတ္တိကောင်းတယ်။
-အဲဒါကြောင့်လဲ ရခိုင်ဆိုတာ ကျန်နေသေးတာပါ… အဲဒါကြောင့်လဲ ရခိုင်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အားကောင်းစွာထွန်းကားနေသေးတာပါ။
-ဒါပေမယ့် သူတို့ တစ်လျှောက်လုံး နာမည်ဖျက်ခံနေရတယ်
-မျောက်ပြ ဆန်တောင်း ဓါးစာခံ အလုပ်ခံနေရတယ်…
-အင်အားကြီး အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရဲ့ မဟာဗျူဟာခတ်ကွင်းအဖြစ်
-မျက်နှာဖုံးအမျိုးမျိုးစွပ်ပြီး ခြေဝင်ရှုပ် လက်ဝင်ရှုပ် တာ ခံနေရတယ်…။
-သူတို့အိမ်ကို သူများအိမ်ပါ လို့ ဗြောင်ပြောလာမယ့်တစ်နေ့ မရောက်လာပါစေနဲ့လို့ပဲ …..။
ဒုံး… ဒုံး …. ဒုံး …
ဒုံး … ဒုံး … ဒုံး
ဦးဦးပါလေရာ တယောက်ပဲ နားလည် ခံစားပေးဖေါ်ရတယ် ။
အဲဒီမျက်နှာဖုံးစွပ်တွေရဲ့ ခြေတွေ… လက်တွေ… ရှုပ်တာတွေကို မြင်တတ်ဖို့လိုသဗျ…
ဒါပေမယ့် ရခိုင်လူမျိုးတွေတင်မကဘူး… ကျန်သေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတော်တော်များများက…
နိုင်ငံရေးစာပေတွေ… နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ဝေးခဲ့လေတော့…
အယူအဆအမှန်တွေ… အတွေးအခေါ်အမှန်တွေကို လေ့လာခွင့်မရခဲ့လေတော့…
သူများပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီ… သူများပြောတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တွေကြားမှာ ဗတ်လဘိုင်လိုက်ရင်း…
နှစ်ပေါင်းဆယ်ဂဏန်းချီပြီး စနစ်တကျဖျက်ဆီးထားလို့ ကျုပ်တို့နိုင်ငံသားတွေ…
သမိုင်းအမှားတွေကြောင့် ထူကုန်ပြီ… တုံးကုန်ကြပြီ…
ဖတ်စရာသုတစာပေတွေနည်းပါးလို့ အတွေးအခေါ်နည်းပါးကုန်ကြပြီ… ဗဟုသုတနည်းပါးကုန်ကြပြီ…
ဆင်းရဲတွင်းနက်လွန်းလို့ ပါးနပ်လိမ္မာမှုမရှိ အမြဲရန်လိုနေတဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီ…
ဒါကို ဦးပါ ငြင်းနိုင်ပါသလားဗျာ…
ပြဿနာ ဘယ်ကစတယ် ဘယ်အဖြစ်ကအမှန်လို့တော့ မသိဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒီ ၂နှစ်လောက်အတွင်း အလုပ်လာလျှောက်သူတွေဟာ ရခိုင်တွေများတယ်။
ရန်ကုန်မှာပဲ ဆက်လုပ်တဲ့သူတွေရှိသလို မလေး၊ထိုင်းဆက်သွားတာတွေလည်းရှိတယ်။
အခု သင်္ကြန်အပြီး လာလျှောက်တဲ့ထဲ ၁၆ နှစ် ၊၂၂ နှစ်၊အသက် ၃ဝ မိန်းကလေး ၃ယောက် စာမတတ်ဘူး။
အသက်၃ဝက ကလေး ၃ယောက်နဲ့ တခုလပ်၊
အငယ်လေး ၂နှစ်ကို အမေနဲ့ ထားပြီး ရန်ကုန်မှာ ကလေးထိန်းလာလုပ်တာ အိမ်ဖော်အလုပ်ခို်င်းလို့ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးထွက်ခဲ့တယ်တဲ့။
ပြောချင်တာကတော့ ရခိုင်လေး၊ရခိုင်မလေးတွေရဲ့ ပညာရေး၊လူမှုရေး နိမ့်ကျနေပါတယ်။ဒါခုမှ ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမယ့် အခု ပိုပိုဆိုးလာပြီ။
နောက်ပြီး ပြဿနာတွေဖြစ်လေ သူတို့နေရပ်မှာ လုပ်ကိုင်စားလို့မရတော့လေပါပဲ။
သူတို့ကို အင်တာဗျူးလုပ်ရင်း ရခိုင် ရှေ့ရေးတွက် ရင်လေးမိပါတယ်။
သာယာမယ့် နေရာလေးလို့ပဲ ထင်ထင်နေတယ် ခည …
တကယ် ရောက်မှ ရောက်ဖူးသေးဘဲနဲ့ …
ဒါလည်း ကောင်းနည်း တစ်မျိုးပဲ …
နှစ်ဖက် ပြောကြဆိုကြတာတွေ ကို ဖတ်ပြီး
ဘယ်ဘက်ကမှ ဝင်မရေးရဲလို့ ဝင်မငြင်းတော့ပါဘူး…။
ရခိုင်မှာ ၄ နှစ်လောက်နေဖူးတယ်။ စစ်တွေမှာပါ။ အမှန်က ရခိုင်လဲ ထင်သလောက်မဆိုးပါဘူး။ ကားလမ်းပေါက်တာ ဘယ်နှစ်မှ မရှိသေးပါဘူး။ သူတို့ ကျွန်းလေးလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ကားလမ်းမဖောက်ခင်က ၁ နာရီလောက် ကားမောင်းလိုက်ရင် လမ်းဆုံးပါတယ်။
လျပ်စစ်မီး မဟာဓာတ်အားလိုင်းမရှိပါဘူး။ အခုထိမရှိသေးပါဘူး။ အဲလိုဒေသ မှာ အခုလို လူမျိူးရေးပြသနာဖြစ်တော့ ပြောစရာကိုမကျန်အောင်ပါပဲ။ ဘယ်သူမှားတယ် ဘယ်သူမှန်တယ် မပြောကြပဲနဲ့ အဲဒီ သာယာလှပတဲ့ ဒေသလေး အေးချမ်းသာယာ ပြီး လူနေမှုဘဝဖွငိ့ဖြိုုး အောင်လုပ်ရမှာပါ။ နိုင်ငံတကာ အတတ်ပညာရှငိများ အသိပညာရှငိများ အနေဖြင့် ထိုဒေသရှိသူများအား အပြစ်တင် ဝေဖန် ခြင်းထက် ထိုဒေသခံများ ၏စိတ်ခံစားမှု များ၊ မကြေနပ်ချက်များအား နားလည်အောင်ကြိုးစားပြီး အဖြေရှာဖို့ကောင်းပါတယ်။ အဲဒေသမလုပ်ရလဲ လုပ်လို့ရတဲ့နေရာသွားလုပ်မယ် ဆိုတာကတော့
အစ်မစိတ်ထဲမှာ ရှေးမဆွကရှိပြီးသား ဘင်္ဂါလီလူမျိုး၊ အစ္စလာန်ဘာသာကိုးကွယ်သူတွေကို…
မနေ့တစ်နေ့ကမှရောက်လာတဲ့ ရခိုင်စကားမတတ်… မြန်မာစကားမသိနဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ရခိုင်ဒေသမှာ ကျွန်တော်တွေ့သလောက်…
ဒီဘက်ကလဲ ဘင်္ဂါလီဖြစ်ပြီးရော… ဟိုဘက်ကလဲ ကုလားဖြစ်ပြီးရော…
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအများစုရဲ့စိတ်မှာ အစွန်းရောက်ဘာသာရေးစိတ်ဓာတ်တွေ…
အေးချမ်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရေးကိုလဲ အစွန်းရောက်စိတ်ဓာတ်တွေ ဝင်ရောက်လာမှာကို မလိုလားပါဘူး…
ကိုယ့်ဘာသာမှ ဘာသာစစ်စစ် ၊ ကိုယ့်ဘာသာဝင်မှ လူ ၊ ကိုယ်နဲ့မတူရင် ရန်သူ လို့သတ်မှတ်ပြီး ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးတဲ့သူတွေ ရာဇဝင်မှာနာမည်ဆိုးတွင်သွားမှာလဲ စိုးရိမ်မိပါရဲ့…
အဲဒီလို…လမ်းကို မျိုးချစ်စိတ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့လျှောက်နေကြသူတွေလဲ မြင်မိကြမှာပါ…
ပြောချင်တာကတော့ နောက်များအကြမ်းဖက်ကြမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ကြရင်ဖြင့်…
အဓိကတရားခံနဲ့ အကြောင်းတို့ရဲ့မြစ်ဖြားခံရာဖြစ်တဲ့ အစိုးရကိုပဲ အကြမ်းဖက်ကြပါ…
မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်အားလုံးက ခြံစည်းရိုးတွေလုံအောင်ကာဖို့ အစိုးရကိုဖိအားပေးကြပါ…
အစိုးရကိုပြောမရလို့… အစိုးရကို ယှဉ်မတိုက်နိုင်လို့… နိုင်လို့ရတဲ့သူတွေကို အကြမ်းဖက်တာမျိုး မလုပ်စေချင်တာပါ…
ရခိုင်ဒေသ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနိမ့်ကျလာတာ ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ပြီးသားပါ…
ရခိုင်ဒေသတင်မကပါဘူး… မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာရေးဟာ နိမ့်ပါးသွားခဲ့ပါပြီ…
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ပိုင်းဟာ ရခိုင်ဒေသလို့ပြောလိုက်ရင် ငပလီကမ်းခြေနဲ့ မြောက်ဦးရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေရှိတဲ့နေရာလို့ နိုင်ငံတကာမှာ သိခဲ့ကြပါတယ်…
အခုတော့ ဘင်္ဂါလီနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို တွဲမြင်နေကြပါပြီ…
တစ်နေ့နေ့မှာ အရင်လိုအချိန်မျိုးပြန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်…
ဒီလိုဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာအမြင်မစောင်းရလေအောင်…
နေထိုင်ကျင့်သုံးရမယ်… လူကြီးလူကောင်းဆန်စွာဆုံးဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားကြရဦးမှာပါ…
စာရေးကောင်းသူကြီးတို့ရဲ့ အတွေးအမြင်လေးတွေကိုတော့ဖြင့် ဖတ်ကြည့်ချင်သား…
လူနေမှုမဖွံ့ဖြိုးရာကနေ အတွေးအမြင်တွေမဖွံ့ဖြိုးတော့ မမှားသင့်တာတွေမှားခဲ့တာပါ့…
အခုပြသနာက တစ်ဖက်ထည်းက ဖြေရှင်းလို့မရပါဘူး…
အစိုးရရော… NGO တွေရော… ဒေသခံတွေရော ပူးပေါင်းမှပြီးမယ့် ပြသနာပါ…
မပူးပေါင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လဲ ဖြေရှင်းလို့မရမယ့် ပြသနာပေါ့ဗျာ…
အန်ဂျီအိုတစ်ယောက်လို့မပြောရဘူးနော်..ကိုကြောင်ဝတုတ်က ရခိုင်တွေကို နိုင်လို့ရတဲ့သူကိုနိုင်တယ်လို့မှတ်တယ်..နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦးရှင့်… ကျမတို့တွေနိုင်နေသလား ကျမတို့တွေပဲ အနိုင်ကျင့်ခံနေရသလား ။ ရွှေပြားရွာတစ်ရွာလုံးပြာကျသွားပြီး မောင်တောတစ်မြို့လုံးမှာ ၁၀% ပဲကျန်နေတော့တဲ့ လူနည်းစုတွေက ကျမတို့တွေပါ..။
ကိုကြောင်ဝတုတ်ပြောတဲ့ အကြမ်းဖက်ဆိုတဲ့ စကားလုံးက တစ်ဘဝလုံးအကြမ်းဖက်ခံလာခဲ့ရတဲ့ ကျမတို့တွေအတွက်သိပ်မတရားသလိုပဲနော်…။ အန်ဂျီအိုက သာသနာ့အလံ -င်ကြားညှပ်တယ်လို့ သတင်းထွက်တဲ့ မိန်းမကြောင့်ပွဲဆူတာကို အကြမ်းဖက်တယ်…။ သီတာထွေးကိုမှတ်မိသေးလားရှင့်…။ မုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့ အသက်လေးနှစ်အရွယ်ကလေးနှစ်ယောက်ကို မှတ်မိသေးလားရှင့်..။ မကြာသေးဘူးနော်.. ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်နေပြီး ကိုယ့်ရွာမှာကိုယ်နေပြီးအကြမ်းဖက်ခံရတာ.. ကလေးတွေသေသွားကြရှာပြီ..။ း(
အန္တရယ်ကောင်တွေလို့ သတ်မှတ်ရတဲ့ အထိ ဆိုးသွမ်းအကြမ်းဖက်နေကြတဲ့လူတွေ ဟာ အဲလိုသတ်မှတ်ခံရအောင် ကျမတို့တွေကိုဘယ်အထိလုပ်ထားလဲ သိပါသလား ကိုကြောင်ဝတုတ်…။ ကျမတို့အိမ်တွေပြာကျတုန်းက ကုလားတွေအကြမ်းဖက်တယ်လို့ ဘာလို့မပြောဘဲ…… ခုပွဲဆူတဲ့ကိစ္စကျမှ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အကြမ်းဖက်တယ်အကြမ်းဖက်တယ်နဲ့…။ အဲလိုပွဲဆူအောင်လုပ်တဲ့သူတွေကိုအားပေးနေတာမဟုတ်ဘူး..။ သူတို့မှားတာကိုလက်ခံပါတယ်..။ မလုပ်သင့်တာကိုလုပ်တယ် သက်သေမရှိဘဲလုပ်တယ်…။ ဒါပေမယ့် လူသတ်နေတဲ့သူတွေ ၊ အိမ်မီးရှို့နေတဲ့သူတွေ ၊ မုဒိန်းကျင့်တဲ့သူတွေ ၊ ကမာ္ဘမြေကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေကိုကျတော့ အာဟာရပြည့်အောင်ကျွေးရတာနဲ့ ၊ သနားရတာနဲ့…။ နှိပ်စက်ခံရတဲ့ ကျမတို့တွေရဲ့ ဒေါသပေါက်ကွဲမှု – ဒါဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်နဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်..။ တောင်ကုတ်ကိစ္စ ကျမတို့တွေနဲ့မဆိုင်ဘူး အစိုးရလုပ်တာ ။ အဲဒီ သာသနာ့အလံ-င်ကြားညှပ်တယ်လို့ သတင်းထွက်လို့ဒေါသပေါက်ကွဲ ပွဲဆူတာ ကျတော့ အကြမ်းဖက်တယ်တဲ့…။ သေနတ်ပစ်လို့သေသွားတဲ့ ကလေးမလေးကျတော့အကြမ်းဖက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့…။ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာမက.. အနောက်ပိုင်းမှာက အရိုးတွန်လိမ့်မယ်ရှင့်…။ တော်တော်မတရားတဲ့လူတွေ ။ အကြမ်းဖက်ခံနေရတာက ကျမတို့တွေပါရှင့်…။
ဂျပန်က အန်ဂျီအို အဖွဲု့တစ်ခု စစ်တွေမှာရှိတယ်..။ မကျည်းမြိုင်တစ်ရွာလုံးအတွက် လမ်းတွေ၊ သောက်ရေကန်တွေ ဂျပန်အန်ဂျီအိုက လုပ်ပေးပါတယ်ရှင့်…။ မာတီဇာလာလို့ ယူနီဆက်လာလို့ ကျမတစ်သက်တော့ ယင်လုံအိမ်သာ လှုံ့ဆော်ရေးအတွက်လားဘာလား လွယ်အိတ်အဝါနုရောင်တစ်လုံးပဲရဖူးတယ်..။ ဒါတောင် ကျမတို့အဖေက အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ အရာရှိမို့လို့… အဲဒီပရောဂျတ်အတွက် သင်တန်းခေါ်လို့ရတာ..။ ကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိပါတယ်… ဒါပေမယ့် ရခိုင်ပြည်က ဆင်းရဲပါတယ် အနှိမ်ခံရပါတယ်..ဘာသာရေး စိတ်ဓာတ်ရေး အနှိမ်ခံနေရပါတယ်လို့ ကမာ္ဘပတ်ငိုပြနေတဲ့သူတွေအတွက်ပါ…။ အိမ်တွေမီးရှို့ခံနေရတဲ့ လူမျိူးရေး ဘာသာရေး အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်ခံနေရတဲ့ ရခိုင်လူထုတွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူးရှင့်……..။ ရသေ့တောင်ခရိုင် အငူမော်ရွာမှာမှာ အန်ဂျီအိုက လမ်းတွေ ၊ တံထားတွေလုပ်ပေးပါတယ်… လုပ်ပေးမှာပေါ့ ကုလားရွာရှိတာကိုး……။ ရခိုင်ရွာတွေကို skip လုပ်ပြီး တံတားလေးတွေလုပ်ပေးထားတာတွေကို မျက်မြင်ကိုယ်တွ့ကြုံဖူးသူအဖို့……. speechless ပါပဲရှင့် ။
အကြမ်းဖက်တာက ကျမတို့တွေရဲ့ နဂိုစိတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်…. ဘယ်လိုမှလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး ။ ဒီတော့ ဖိအားပေးစေချင်တယ်ဆိုရင် ကိုကြောင်ဝတုတ်ခေါင်းဆောင်ပြီး အစီစဉ်စလုပ်ပါရှင့် နောက်ကလိုက်ဖို့အဆင်သင့်ပဲနော်…။ ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အာဏာကို နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော် ခပ်တည်တည်ယူထားတဲ့သူကလား.. ဖိအားပေးမှုကိုဂရုစိုက်မှာ…။ ဝေးပါသေးတယ်ရှင့်…။ အဲလိုဖိအားပေးလို့ရသွားမယ်ဆိုရင် အရင် ကော့မက်မှာပြောထားသလိုပဲ ကျမကတော့ ကိုကြောင်ဝတုတ်ကိုကျေးဇူးရှင်စာရင်းသွင်းပြီး တစ်သက်လုံးကျေးဇူးတင်နေမှာပါ…။ တစ်ကမာ္ဘလုံးက ဖိအားပေးတာတောင်မှ ခပ်တည်တည်နဲ့ နေနေတဲ့ သူကလား ကျမတို့ကိုအရေးလုပ်မှာ..။ ပြသနာဖြစ်ရင် ကုလားကို မိုးပေါ်ထောင်ပစ်ပြီး ရခိုင်ဆိုရင် ရေချိူးနေတဲ့ ကလေးကိုတောင်ထိအောင်ပစ်တဲ့အစိုးရပါရှင့်..စဉ်းစဉ်းစားစားလေးပြောပါဦး..။
အကြမ်းအားဖြင့်( အပြင်ကအမြင်တွေ) ထင်ဟတ်ပြောပြရရင်တော့…
ယူအန်လိုအဖွဲ့အစည်းက.. အမေရိကန်မနဲ့သွားငြိလိုက်ကတည်းက.. ရခိုင်ပြည်သားများအပေါ်..ကမ္ဘာ့နို်င်ငံကြီးများက.. ပေးထားတဲ့အမှတ်ဟာ.. ဟိုးအောက်ဆုံးရောက်သွားပြီဖြစ်ပါကြောင်း.. ရယ်လို့ပါပဲ..
ခုတော့လည်း.. ဒါတွေဒါတွေ.. ပြီး…ခဲ့ပါပြီ…။ :buu:
အို..သူကြီးကလဲ…မနောက်ပါနဲ့ဗျာ..အမေရိကန်မနဲ့ငြိတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်…. ဒါပေမယ့် အောက်ဆုံးမှတ်ထက်အဝီစီထိထိုးကျနေတဲ့သူတွေရှိပြီးသားပါ…။ အမေရိကန်သံရုံးကိုဗုံးခွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်..။အန်ဂျီအိုတွေကို အုပ်စုလိုက်ပြန်ပေးဆွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်…။
ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စအတွက် ရခိုင်တွေမှာအမှားမကင်းဘူး… (ဘာသာရေးနဲ့ပက်သက်ရင် သည်းခံနိုုင်စွမ်းတော်တော်နည်းကြတာကိုး)
ရခိုင်တွေက ကုလားတွေ ၊ အန်ဂျီအိုတွေ နာမည်ဖျက်ထားလို့ အရင်တည်းက ရစရာမရှိအောင်နာမည်ပျက်ပြီးသားပါ…။ ခပ်ထပ်ဆိုးသွားတာတော့ စိတ်မကောင်းစရာပေါ့ရှင့်..။ အချင်းချင်းဝိုင်းထိန်းနေကြတာမို့နောက်တစ်ခါစည်းပျက်ကမ်းပျက်ကိစ္စတွေထပ်မဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်းနေရပါတယ်…။
ညီမလေးကြောင့်ရခိုင်ဘက်ကအခြေအနေတွေ တော်တော် သိလိုက်ရပါတယ်…
မှန်တာပြောသစ္စာ… ညီမလေးပြောတာ ဖတ်ပြီး ရခိုင်တွေဘက်က စိတ်မကောင်းပါဘူး…
NGO ဆိုတာလဲ လူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမို့ စနစ်ဘယ်လိုကောင်းကောင်း လစ်ဟာ မှုတွေ ရှိနေမှာပါပဲ… စနစ်ဂျောင့်မဟုတ် .. (ခွက်ဒစ် ဒဂျီး)
ဥမပါ… အဲလေ.. ဥပမာ…World Vision လိုအဖွဲ့ အစည်းမှာ ကရင်၊ ခရစ်ရန် များ တော်တော်များတာကိုလဲတွေ့ရပါတယ်…
ဒါပေမဲ့ ရခိုင်သူငယ်ချင်းတွေလဲရှိလို့ ရခိုင်တွေရဲ့ စိတ်ကြီးပုံကိုလည်းသိပါတယ်….
ရခိုင်မှာ တာဝန်ကျဘူးတဲ့ အူးရီးတော် တစ်ယောက်ပြောပြတာတော့… အဖြစ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်… မွတ်စ် တွေက ဟာလာသားမှစားတယ်… သူတို့မွေးထားတဲ့ကြက်ကို ရခိုင်ကိုလာရောင်းတော့၊ ရခိုင်က ကြက်အရင် ကြည့်မယ်ဆိုပြီး လဇိကို ဖြစ်လိုက်တော့ ကြက်က သေသွားရော၊ အိုက်တော့ မင်းကြက်က အသေကြီး မယူဘူးဆိုတော့၊ မွတ်စ်က တောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ ပေးသလောက်ပဲယူပြီးထားခဲ့ရတယ်….
မခံနိုင်တော့ ရန်ဖြစ်ကြရော၊ အိုက်လို ပြသနာမျိုးတွေ ခဏခဏ စခန်းမှာရှင်းရတယ်တဲ့….
(BTW အူးရီးတော်က အညာသား ဗုဒ္ဒဘာသာစစ်စစ်ပါ)
အမကတော့ တောင်ငူကလဲ တောင်ငူ မောင်းထောင်ကလဲ မောင်းထောင်လို့ပဲထင်ပါတယ်….
လွန်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင့်…။ လွန်တဲ့သူတွေရှိလို့အခုလိုဖြစ်ရတာလည်းပါပါတယ်..။ တချို့တွေ အတွေးတိမ်ကြပါတယ်..။ အထူးသဖြင့် အားတိုင်းယားတိုင်းအရက်ထိုင်သောက်ပြီး ကုလားတွေက ညစ်တာပဲ ငါတို့လည်းညစ်မယ်ဆိုတဲ့ သူတွေပေါ့ရှင့်..။ အဘဖောလိုပဲ ကျမလည်းသူတို့ကိုမကြိုက်ပါဘူး ဒါပေမယ့် လူဟာလူပဲမို့ လူလိုမြင်ပါတယ်..။ ကိုယ့်လူတွေမှားကြတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းသိနေတော့ အပြစ်တင်ချင်ပေမယ့် မတင်ရက် မတင်ချင်ပေမယ့် တင်ရမှာပါပဲ..။ ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွက် ကျမကတော့ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်…။ တရားဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ကိစ္စကို လုပ်ရအောင် အတွေးအခေါ်တွေလွဲသွားကြပြီလားလို့ စိုးရိမ်မိပါတယ်ရှင့် ဒါပေမယ့်ခုတော့အချင်းချင်းထိန်းကြလို့ငြိမ်သွားပါပြီ..။ ပြောရရင် နယ်မြေမလုံခြုံတော့ ပညာတတ်တွေ ၊ တတ်နိုင်တဲ့သူ ကြောက်တာရော..။ ဘာဖြစ်မှန်းမသိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအတွက် ပြောင်းရွေ့ကုန်ကြလို့ အစစအရာရာနိမ့်ကျကုန်ပါပြီ..။ တနေ့နေ့မှာတော့ ကျမတို့လည်းတတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်ရွာကိုအကျိူးပြုမယ့်ကိစ္စတွေကိုလုပ်ပေးဦးမှာပါ…။ ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်လူမျိူး ကိုယ့်ဆွေမျိူး ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်ရွာကိုချစ်ကြတာပါပဲ မဟုတ်လားရှင့် ။
ရန်ကုန်-မန်းလေး အမြန်လမ်းကပြန်လာတိုင်း အနောက်ရိုးမကို လှမ်းကြည့်ရင် စိတ်ထဲ တမျိုးကြီးပါ…. ငြိမ်းချမ်းစေချင်ပါတယ်… လူဆိုတာ လက်သည်းဆိပ်ရင် လက်ထိပ်နာတာက ပထမ.. နိုင်ငံကြီးသားပီသဖို့က ဒုတိယမှ စင်းဇားကြမှာပါ… ရေတို ကို မကြည့်ပဲ ရေရှည်အတွက် အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းနောက် အသေအချာ လိုက်ဖို့ လိုနေပါပြီ
WoW က စပြောလာတဲ့…
World Vision တို့လို World Concern တို့လိုအဖွဲ့တွေဟာ ခရစ်ယာန်အလှူရှင်များရဲ့…
ခရစ်ယာန်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ NGO တွေဖြစ်လေတော့ကာ… ခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်သူများကို ဦးစားပေးရမယ်လို့ သူတို့ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာကိုက တရားဝင်ပြဌာန်းထားပြီးသားဖြစ်လေတော့…
ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များအလုပ်ရဖို့ ဦးစားပေးခံရတာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး…
ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အစည်းတွေက နိုင်ငံတကာ NGO လုပ်ဖို့အင်အားကမရှိလေတော့…
ရသမျှ… ပေးသမျှ… ထိုင်ယူရမှာပဲ…
အဘ လည်း ၊ ရခိုင်ကို မကြာခဏ ရောက်ဖူးသူမို့ ၊
အဘ အမြင် ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ။
၁ ။ ရခိုင် တွေဟာ ဟိုး အရင် ကတည်းက လူမျိုးရေး အစွန်းရောက်ပါတယ် ။
၂ ။ ရခိုင် တွေဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ပညာရေး ရေချိန် အတော်ကျနေပြီး ၊
၃ ။ အဲဒါရဲ့ အကျိုးဆက် အနေနှင့် ၊ အတွေးအမြင် ကျဉ်းမြောင်းနေပါတယ် ။
ဒါကတော့ ၊ ကိုယ်တွေကလည်းဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မို့လို့ ၊
ကိုယ့် တိုင်းရင်းသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချင်းချင်းကို ဝေဖန်တာပါ ။
ဟိုဖက် ( ဘင်္ဂါလီ / မွတ်ဆလင် ဖက် ) ကိုတော့ ၊
( ကိုယ် နှင့်လဲ ဘာသာမတူတာ က တစ်ကြောင်း )
ဘာ တစ်ခုမှကို အကောင်း မ မြင်ဘူးတဲ့အတွက် ၊
ဘာမှကို မပြောတော့ပါဘူး ( ရှင်းရှင်း ပြောတာ ) ။
မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ပြောချင်တာကတော့ ၊
သူတို့ဖက်က ဆိုးလို့ဆိုပြီး ၊ ကိုယ့်ဖက်က လိုက်ဆိုးမှာ ဆိုတဲ့ ၊
အယာတိုလာ နည်းကို ၊ ကန့်ကွက်တယ် ၊ မကြိုက်ဖူး ဆိုပြီး ၊
ကိုယ်တွေဖက်ကလည်း အယာတိုလာ နည်းကိုဘဲ သုံးမယ် ဆိုရင်တော့ ၊
( ဆိုလိုတာက ၊ တရားဥပဒေ ဘောင်အတွင်းက အဆင့်မြင့်မြင့် မတုံ့ပြန်ဘဲ ။
ကမာ္ဘကြီးက လက်ရှိ လက်ခံထားတဲ့ ၊ လူသားဆန်မှု အခြေခံ အချက်တွေကို ၊
မျက်ကွယ်ပြုပြီး ၊ ယဉ်ကျေးမှု နဲစွာ လက်တုံ့ပြန်ကြမယ် ဆိုရင်တော့ )
၁ ။ ကျနော်တို့ရဲ့ အေးချမ်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ ဂုဏ်ကျက်သရေ ညိုးနွမ်းရပါမယ် ။
၂ ။ အဆိုးဆုံးက ကျနော်တို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချင်းချင်းလဲ အပိုင်းပိုင်း ကွဲကုန်ကြပါမယ် ။
၃ ။ ကမာ္ဘကြီးကလဲ လက်မခံတဲ့ အတွက် ရေရှည် စစ်ပွဲမှာ ကျနော်တို့ ရှုံးရပါလိမ့်မယ် ။
၄ ။ တကယ့်တကယ်မှာလည်း အဲဒီ အကြမ်းဖက် တုံ့ပြန်တဲ့နည်းက ၊
အနူတ်လက္ခဏာသာ ပြတဲ့အတွက် ၊ ဘုန်းကြီး ဝီရသူ တို့တောင်မှ ၊
အသံပြောင်းလာရတာကို သတိထားကြည့်ကြည့်ပါအုံး ။
ကြုံတုံး ၊ နောက်ထပ် ပြောချင်တာ တစ်ခုကတော့ ။
ကျနော် တစ်ခါ ပြောခဲ့ဘူးပါတယ် ၊ ပါးနပ်ကြစမ်းပါ ၊ Smart ဖြစ်ကြစမ်းပါ ။
လူကြီး အိုဘားမား ကတော့ ၊ လူကြီးစကား လူ့အခွင့်အရေး ပြောနေမှာဘဲ ၊
ဒါပေမယ့် ၊ လူငယ် စီအိုင်အေ ကတော့ သူ့အလုပ် သူလုပ်သွားမှာပါဘဲ ။
အဲဒီလို တပည့်လိမ္မာလို့ ဆရာ အာပါတ်လွတ်ရတာကို မြင်အောင်ကြည့်ကြပါ ။
အဲဒီလိုပါဘဲ ၊ လူကြီး အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ ၊
လူကြီးစကား လူ့အခွင့်အရေး ပြောနေမှာပါဘဲ ။
“Someone has got to do the (dirty) things (if) no one else wants to do”
ဒါနဲ စကားမစပ် မသိလိုလို့မေးပျဇေ…။
NGO တွေက ဘာလို့များ… ရခိုင်ပြည် တခြားဆင်းရဲ ချို့တဲ့ တဲ့နေရာတွေထက် ဘူးသီတောင် ၊ မောင်တော ဘက်ကိုပဲ စိတ်အားထက်သန်စွာ ကူညီချင်နေရတာလဲ ဟင်……….။
” အဘဖောလိုပဲ ကျမလည်းသူတို့ကို မကြိုက်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် လူဟာလူပဲမို့ လူလိုမြင်ပါတယ် ”
ကျေးဇူး ပါဘဲ ၊ ဆုမြတ်မိုး ။
ဆုမြတ်မိုး ပြောလို့ ထပ်ဖြည့်ချင်တာ ၂ ခု ထပ်ရသွားတယ် ။
၁ ။ ” အားတိုင်းယားတိုင်းအရက်ထိုင်သောက်ပြီး ”
ဟုတ်တယ် ၊ ရခိုင် ယောက်ျားတွေ အရက်သောက်ချက်က ကမ်းကုန်တယ် ။
နောက်ပြီး သူတို့က အရက်ဆီ ကို ချက်သောက်တာဆိုတော့ အသက်တိုတယ် ။
ရခိုင် ကို ပို့ပေးနေရတဲ့ ကုန် ၄ ပုံ ၁ ပုံ လောက်က အရက်ဆီ ပေပါ တွေ ။
၂ ။ ” နယ်မြေမလုံခြုံတော့ ပညာတတ်တွေ ၊ တတ်နိုင်တဲ့သူ ကြောက်တာရော..။ ဘာဖြစ်မှန်းမသိနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအတွက် ပြောင်းရွေ့ကုန်ကြလို့ ”
ဟုတ်တယ် ၊ ရခိုင် ပညာတတ် နှင့် သူဋ္ဌေးတွေ အကုန် ရန်ကုန် ရောက်နေကြပြီ ။
အဲဒီတော့ ၊ ပညာအားနဲတဲ့ ဆင်းရဲသား ရခိုင် တွေပဲ ရခိုင် မှာ ကျန်ခဲ့တယ် ။
အဲဒါက အခြေအနေ ကို ပိုဆိုးစေတယ် ။
အဲဒီ ၂ ချက်အရ သုံးသပ်ရရင် ၊ ရခိုင် တွေဘက်က ပြင်ရမှာတွေလဲ အများကြီး ။
ကိုယ့် ပြည်နယ်ကို တကယ် ကာကွယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ၊
တခြားရောက်နေတဲ့ ရခိုင် တွေ ( အထူးသဖြင့် ရခိုင် ပညာတတ် နှင့် သူဋ္ဌေးတွေ )
ရခိုင်ပြည်ကို အကုန်ပြန်လာသင့်တယ် ။
တခြား လူမျိုးတွေက Face Book ပေါ်က ၊ လေလှိုင်းပေါ်ကနေဘဲ ချစ်ပြနေမှာ ။
ရခိုင့် အရေးကို ရခိုင် တွေဘဲ အဓိက အနာခံ လုပ်ရမှာဘဲ ။
လူအား နှင့်မှ မတားနိုင်ရင် ၊ တားဖို့ မလွယ်ဘူး ။
ဒီမှာလည်းလူငယ်အုပ်စုတွေ ၊ အသင်းအဖွဲု့တွေရှိပါတယ်ရှင့် ။ အရေးကြုံရင် ကိုယ်မရှိရှိတဲ့ကြားက ထောက်ပံ့ကြပါတယ်..။ အဖွဲ့အစည်းတွေပေါင်းပြီး ဘဝအတွက်ရုန်းကန်နေတဲ့ကြားက တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်ရွာအတွက်လုပ်နေကြပါတယ်…။ တနေ့နေ့မှာလည်း ကျမတို့တွေလည်းပြန်ကိုပြန်ပြီး တတ်နိုုင်သလောက်လုပ်ပေးဦးမှာပါ..။ ရခိုင်သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်..။
ခေတ်ဟောင်းသီချင်းလေးပေမယ့် ဘယ်တော့မှရိုးမသွားဘူး..။ လှိုင်းလုံးချေဆိုတဲ့သီချင်းလေးပါ…။
ဟိုအဝီးက ချစ်မိတ်ဆွေ ပညာပြည့်စုံကတ်ခကေ သာစွရေ ငါရို့ရပ်မြေ ပြန်လာဖို့ပြောပီးလိုက်ပါဝေ…။
တဲ့…။ အဝေးမှာရှိတဲ့ချစ်မိတ်တွေကို ပညာတွေပြည့်ဝပြီး လိုချင်တာရတဲ့တစ်နေ့မှာ ကိုယ့်ရပ်မြေကိုပြန်လာဖို့ လှိုင်းကလေးနဲ့အတူ အမှာစကားပါးတဲ့ အကြောင်းလေးပါ..။ ကျမတို့ ပြန်မှာပါ ..။
” ကျမတို့ ပြန်မှာပါ ”
အမြန်သာ ပြန်ပါ ၊ မ ဆုမြတ်မိုး ။
အမြင် ကျဉ်းမြောင်းနေပြီး ၊ တုံ့ပြန်ပုံ လွဲနေတဲ့ ရခိုင် ထုကြီးကို ၊
ပညာသား ပါပါ ၊ ဖျောင်းဖျ ဆွဲဆောင်နိုင်မှာက ၊
မ ဆုမြတ်မိုး တို့လို ရခိုင် အစစ် ပညာတတ်တွေကမှ လုပ်နိုင်မှာပါ ။
ကျနော်တို့လို ဘေးလူက ဝင်ပြောမိရင် ၊
ဒေါ်လာစားပြီးဘဲ ပြောနေသလိုလို ၊
ကုလားကိုမှ သိပ်ချစ်နေသလိုလို ၊
မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင် လိုလို ၊ အပြောခံရတယ် ခမျ ။
ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အနောက်ဘက်တံခါးကို ၊
ရခိုင်တွေ ရှိနေ စောက်ရှောက်နေတယ် ဆိုတာကို သိနေမှဘဲ ၊
ကျနော်တို့တွေ စိတ်ချ လက်ချ အိပ်ပျော်မှာပါ ။
ကျွန်တော်တော့ လာမယ့် တနင်္လာနေ့ စစ်တွေသွားပြီး…
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် စီးဖုလေးကို မိုးအေးအေးလေးမှာစားပြီးပေါ့…
အခြေအနေပေးလို့ ရွာထဲရောက်တိုင်း ဒီပို့စ် လေးထဲ ရောက်ပါတယ်
ပို့စ် ကတစ်ခါ ဖတ်ပြီးသားပေမဲ့ ကွန်မန့်လေးတွေ ဝင်ဖတ်ရတာကိုက အရသာ ပဲ
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အတွေး အမြင် အယူအဆ မတူကြပေမဲ့ တစ်ဖက်သားရဲ့ အားနဲချက်ကို ဖိပြီး ကိုယ်နိုင်အောင် ပြောတာမျိုး မဟုတ်ပဲ အကျိုး အကြောင်း နဲ့ ရှင်းလင်းပြောကြတာတွေက (စောင့်ဖတ်နေသူတစ်ယောက်အမြင်ပြောရရင် )တကယ်ကို အထင်ကြီး လေးစားဘို့ကောင်းတယ်
အကြောင်းအရာ တစ်ခု မှန်ခြင်း မှားခြင်းက ကြည့်တဲ့သူ အပေါ် ကွာနိုင်သလို
တစ်ခါတစ်လေ တစ်ယောက်ထဲ မှာကိုပဲ အခုဒီ အဖြေပေမဲ့ အချိန်ကြာလာတော့ ဟို အဖြေဖြစ်သွားတာလဲ ရှိတတ်တာမို့ ဘယ်ဟာက အဖြေမှန် ဆိုတာတော့ မဝေဖန်လို
ကျနော့သူငယ်ချင်းထဲ မှာလဲ ရခိုင် လူမျိုး တော်တော် များများ ရှိတာမှာ
အယူအဆ တူသူ မတူသူ တွေ ရှိပေမဲ့ အားလုံးကတော့ ခင်ဘို့ ကောင်းသူ ချည်းပါပဲ
ရွာသူ ဆုမြတ်မိုး လို ရခိုင်တွေချည်းပဲ ဆိုရင်တော့ ရခိုင်မှာ ကျနော်တို့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ အနေအထားမျိုး အမြန်ဆုံး ဖြစ်လာမှာ သေချာတယ်
ရခိုင် ကိစ္စမှာလဲ အခု လို ဆွေးနွေး ငြင်းခုံ
အခြား အကြောင်းအရာတွေလဲ ဆွေးနွေး ငြင်းခုံ ပါဦး
လစ်လစ် ကြီး ကိုဖက်ကလဲ တစ်တစ် တွေ အတွက် စိတ်ပျက် မနေပါနဲ့ဦး
အခု လို ကွဲပြား နေတာကိုက အလှ တစ်ခုပါ
သူကြီးရဲ့ ဒီမိုမြို့သစ်ကြီးကို စာမေးပွဲစစ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါလေ….
ကျွန်တော်ဟိုးအရင်တုန်းက ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ်ကို ပြန်ဖတ်ကြည့်မိတယ်…
ရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောရရင်… အဲဒီပိုစ့်နဲ့ ဒီပို့စ်နဲ့ရည်ရွယ်ရင်းခြင်းက အတူတူပါပဲ…
အဲဒီပိုစ့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့… တိုင်းပြည်တစ်ခုကို ပန်းခင်းကြီးတစ်ခင်းနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြီး…
မတူကွဲပြားကြသောနိုင်ငံသားတွေကို ပန်းပင်အမျိုးမျိုးနဲ့တင်စားပြီး နိုင်ငံကြီးကိုကောင်းစေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့…
ကျွန်တော်ဟာ လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တိုင်း တစ်ရွာလုံးနဲ့တစ်ယောက်…
ဒီမိုရွာ… အခုတော့ ဒီမိုမြို့ကြီးရဲ့လမ်းကြောင်းမလွဲရလေအောင်…
အဲဒီလိုပဲ ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ရွာကို ဒုက္ခပေးခံရတဲ့အချိန်တုန်းကလဲ…
ရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်ပြောဖြစ်တာများပါတယ်… ဘာဖြစ်လို့ပြောဖြစ်သလဲဆိုတော့…
နိုင်ငံတကာအမြင်မှာ ရုပ်ဆိုးလို့ပါ… နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာက ကိုယ့်နိုင်ငံအပေါ်
ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးကို မြန်မာဂုဏ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ နိုင်ငံတကာကိုဝင့်ကြွားချပြချိန်မှာ…
နိုင်ငံတကာက ဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံ ဘာလို့များဒီဘုရားကြီးကို ပိုက်ဆံအကုန်အကျခံပြီး…
ရွှေချထားလိုက်တာများ… အဲဒီပိုက်ဆံတွေကို တခြားနေရာမှာသုံးမယ်ဆိုရင် ပိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုး…
ဒါပေမယ့် ဒါက နိုင်ငံတကာအမြင်ပါ… ကိုယ့်အပေါ်တခြားလူများရဲ့အမြင်ပါ…
Guy Delisle ရေးတဲ့ Burma Chronicles ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်…
နိုင်ငံခြားသားတွေ ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတဲ့အမြင်ကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားလို့မရပါဘူး…
တစ်ဖက်နိုင်ငံကဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေ ဒေသခံတွေကို နှိပ်စက်တာ… ဒုက္ခပေးတာတွေရှိပါတယ်…
ဒါပေမယ့် မီဒီယာတွေပေါ်မှာ… နိုင်ငံတကာကမြင်လာအောင် ဒေသခံတွေ မလုပ်နိုင်ပါဘူး…
ဒါပေမယ့် ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုမှာလုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေက နိုင်ငံတကာလဲမြင်သွားတယ်…
အသံမထွက်ဘဲကလိနေတာ ဘယ်သူမှမသိပေမယ့်… ထအော်လိုက်တာတော့လူကြားသွားတာပါပဲ…
ဟိုကလုပ်တာလူမသိဘူး… လူမကြားဘူး… ကိုယ့်ဘက်ကလုပ်တာ ဟိုးလေးတကြော်…
ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာက ကျွန်တော်တို့ဒေသခံနိုင်ငံသားတွေ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရတာကို…
နိုင်ငံတကာသိအောင်လုပ်ရမယ်… အစိုးရတာဝန်မယူတာကို တာဝန်ယူလာအောင်တွန်းအားပေးရမယ်…
အစိုးရလဲ ဒီဖိအားတွေကို မခံရဘူးမထင်ပါနဲ့… ခံရပါတယ်…
အဲဒီလိုပဲ… ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ထိလွယ်ရှလွယ်ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာ…
အစိုးရက နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ မြင်အောင်ကြည့်ရင်မြင်ပါတယ်…
ဒါကို မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်… ဒါကိုပါးပါးနပ်နပ်တွန်းလှန်ရမယ်…
အဲဒီမှာ ကိုထူးဆန်းကြီးနဲ့ ကျွန်တော် NGO ကိစ္စပြောဖြစ် ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ကိုး…
အဲဒီမှာ ခေါင်းစဉ်က အဲဒီဘက်အားသာသွားပြီး… အခုလို ဆွေးနွေးတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်ပေါ့…
ခက်တာက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် NGO ကလူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်…
ကြောင်ဝတုတ်ကို NGO နဲ့ခွဲမမြင်လိုက်တာပေါ့ဗျာ…
နောက်ဆို… ရခိုင်ရယ်… NGO ရယ်… ဘင်္ဂါလီရယ်… ကြောင်ဝတုတ်ရယ်ဆို ဒီမိုမြို့ထဲတွဲမြင်ကြတော့မှာပေါ့…
အဲဒီတော့ မဖတ်ကြရသေးသူများလဲ ဖတ်ကြရအောင်…
ကျွန်တော့်ကို NGO ကနေဖယ်ထုတ်ကြည့်လိုက်…